March 2017 | Language Century Language Century
ကျားစစ်သူကြီး ဟွမ်ကျူံး။
2:52 AM C-Knowledge , Chinese
ဟွမ်ကျူံးဟာ ၃ ပြည်ထောင်ခေတ်မှာ ရှုဟန့် ပြည်ထောင်၏ ကျားစစ်သူကြီး ၅ ဦးထဲမှ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားစစ်သူကြီး ၅ ဦးထဲမှာ အသက်အကြီးဖြစ်ပေမယ့် သူဟာ လူငယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဖြတ်လက်စွာ တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး ကြံခိုင်မှုလည်း ပြည့်ဝသလို ရင့်ကျက်မှုလဲ အပြည့်ရှိတာကြောင့် လူအများက ရိုသေလေးစားတဲ့ စစ်သူကြီး တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit - SwamHtet 天下第一
ဟွမ်ကျူံး 黃忠 ဟာ 南陽 နန်းယန်ဇာတိဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မွေးခုနစ်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။ သူဟာ အစပိုင်းမှာ ကျင်းပြည်နယ်က လျိူပြောင်ဆီမှာ နယ်စောင့်တပ်မှူးစစ်သူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ သူဟာ ချန်ဆားနယ်ကို လျိူပြောင်ရဲ့တူ လျိူဖန်နဲ့ အတူ ကာကွယ်ရပါတယ်။ လျိူပြောင်သေဆုံးပြီးနောက် သူ့နေရာ ဆက်ခံတဲ့ လျိူချူံးဟာ ချောင်ချောင်းထံမှာ အညံခံခဲ့တာကြောင့် ချန်ဆားအုပ်ချူ ပ်ရေးမှူးဟန်ရွှမ်ထံဆီ ခိုလှုံခဲ့ပါတယ်။
ကမ်းပါနီတိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ စွန်း-လျိူမဟာမိတ်တပ်တွေဟာ ကျင်းနယ်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျင်းပြည်နယ်ဟာ အုပ်ချူ ပ်ရေး နယ်မြေ ၄ ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဟွမ်ကျူံးတို့ရဲ့ ချန်ဆားနယ်လဲ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁၀ ခုနစ်မှာတော့ လျိူပေ့ဟာ နယ်မြေ ၄ ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Romance of the Three Kingdoms မှာတော့ လျိူပေ့ဟာ ကွမ်းယွီအား ချန်ဆားနယ်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ရွှမ်ကလဲ ဟွမ်ကျူံးကို ဦးဆောင်စေပြီး တပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ တပ်ချင်းဆုံတဲ့အခါမှာ ကွမ်းယွီနဲ့ ဟွမ်ကျူံးတို့ စိန်ခေါ်ပြီး ၂ ဦးသား ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ၂ ကြိမ်တိတိ အနိုင်အရှုံးမပေါ်ပဲ ၃ ကြိမ်မြောက်မှာတော့ ဟွမ်ကျူံးကို ကွမ်းယွီအား မြားဖြင့် ပစ်ဖို့ ဟန်ရွှမ်က အမိန့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ဟွမ်ကျူံးဟာ ကွမ်းယွီ ခေါင်းဆောင်းကိုသာ တမင်လွှဲပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ဟန်ရွှမ်က သူ့အား သစ္စာဖောက်သည်ဟုဆိုတာ ဟွမ်ကျူံးကို သတ်ပစ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်သူကြီး ဝေယန် အချိန်မှီရောက်လာပြီး ဟွမ်ကျူံးကို မသတ်ဖို့ တားခဲ့ပြီး ဟန်ရွှမ်ကို ပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယို Link ထဲမှာ ကြည့်ပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်အပျက် သမိုင်းမှာတော့ ဟွမ်ကျူံးဟာ ဟန်ရွှမ်ကို လျိူပေ့ထံ အညံခံဖို့ ဖြောင်းဖျခဲ့ပါတယ်။ ဟွမ်ကျူံးက တကယ်လို့သာ စစ်ဖြစ်ရင် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့် လျိူပေ့ထံ လက်နက်ချခြင်းက အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟု အကြံပေးကြောင့် ဟန်ရွှမ်က လက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ (အမှန်က အဲ့အချိန်မှာ လျိူပေ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ် နောက်ပြီး သူ မင်းမျိူးနွယ် လက်ရှိဘုရင်ရဲ့ ဦးရီးတော်လေ)
Romance of the Three Kingdoms ဝတ္ထုထဲမှာက ဟန်ရွှမ်ကို သူ့မုန်းတီးနေတဲ့ ပြည်သူတွေက ပုန်ကန်ပြီး သတ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ့် သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာတော့ ပြည်သူတွေက သူ့ကို ချစ်ခင်လေးစားကြပြီး သူ့အတွက် ဘုံကျောင်းတစ်ခု ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ အခုချိန်ထိ ချန်ဆားမှာ ဟန်ရွှမ်ကို ကန်တော့တဲ့ပွဲတွေနဲ့ ပူဇော်ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဟန်ရွှမ် ဘုံကျောင်းဟာ ပျက်ဆီးခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Romance of the Three Kingdoms ဟာ ဝတ္ထုတစ်ခုပါပဲ။ တခါတခါ ကျွန်တော်တို့ကို အဲ့ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ မတူလို့ဆိုပြီး လာထောက်တာတွေ ရှိလို့ ကြုံတုန်း တခါတည်း ပြောပြတာပါ။ ROTK ထဲမှာ ပါတဲ့ တချိူ့သော ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက အပြင်မှာ မရှိခဲ့တာတွေ ထည့်ရေးထားတာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လျိူပေ့ထံမှာ လက်ချက်ချပြီးနောက် ဟွမ်ကျူံးဟာ ရှုဟန်တပ်မှာ ဆက်ပြီး အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ လျိူပေ့ လက်အောက်မှာ စတင်ပြီး မြင်တွေ့ရတဲ့ တိုက်ပွဲကတော့ ယိကျိူးနယ်ကို သိမ်းပိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ သူဟာ လျိူပေ့နဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရပါတယ်။ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ ဟွမ်ကျူံးက ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်ပြီး ရန်သူ့မြို့တံတိုင်းပေါ်တက်လဲ သူအရင်ဆုံး ရန်သူ့တိုက်ကွက်ကို ကျားထိုးတိုက်ရင်လဲ သူကပဲ ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်တတ်တာကြောင့် တိုက်ပွဲအပြီးမှာ ရာထူးတိုးခြင်း ခံရပါတယ်။
၂၁၇ ခုနစ်မှာတော့ လျိူပေ့ဟာ ချောင်ချောင်း
ထိန်းချူ ပ်ထားတဲ့ ဟန့်ကျူံးနယ်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ချီတက်လာပါတယ်။ ဒီဟန်ကျူံးတိုက်ပွဲဟာ ၂၁၇ ခုနစ်မှ ၂၁၉ ခုနစ်အထိ ၂ နှစ်ကျော် ၃ နှစ်နီးပါး တိုက်ခဲ့ရပြီး အဆုံးမှာတော့ လျိူပေ့တို့ အောင်ပွဲရပြီး ဟန်ကျူံးဘုရင်အဖြစ် လျိူပေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဟန်ကျူံးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ဟွမ်ကျူံး နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲကတော့ သင့်ကျွင်းတောင်ခြေ တိုက်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ကျူံးနယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ယန်ဖင်ကွမ်း ဂိတ်ဝပေါက်ကို ချောင်ချောင်းက သူ့ရဲ့ စစ်သူကြီး ရှဟော်ယွမ်ကို အစောင့်ထားပြီး ခုခံစေပါတယ်။ တညမှာတော့ လျိူပေ့ဟာ သင့်ကျွင်းတောင်ခြေမှာ စခန်းချနေတဲ့ ရှဟော်ယွမ်ရဲ့ တပ်စခန်းကို မီးမြှားဖြင့် ပစ်ခက်တိုက်ရာ ရှေ့ကာ မြင်းကာ ခံကတုတ်များ အတားအဆီးများ မီးကျွမ်းလောင်ကုန်ပါတယ်။ ထိုအခါ ရှဟော်ယွမ်ဟာ တောင်ဘက်ဂိတ်ကို သူကိုယ်တိုင် စောင့်ရှောက်ပြီး ကျန်းဟဲယ်ကို စခန်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းအား ကာကွယ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လျိူပေ့ရဲ့ ပင်မတပ်ဟာ ကျန်းဟဲယ်ခုခံနေတဲ့ အရှေ့ဘက်ကို ဒလပ်စပ် ဖိတိုက်နေတဲ့အတွက် ကျန်းဟဲယ်ဟာ ရှဟော်ယွမ်ဆီကနေ စစ်ကူလှမ်းတောင်းရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှဟော်ယွမ်က စစ်ကူအနည်းငယ်ဖြင့် ကျန်းဟဲယ်ဆီ စေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကူများ ရောက်ရှိလာတာကို တွေ့တဲ့ ဖားကျန့်းဟာ လျိူပေ့ကို လှမ်းပြောလိုက်ပြီး လျိူပေ့က ပုန်းနေတဲ့ ဟွမ်ကျူံးကို အချက်ပေးရန် အသံကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်စေပြီး စစ်ဗုံသံများကို အဆက်မပြတ် တီးခက်စေပါတယ်။ ထိုအချိန် ရှဟော်ယွမ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဟွမ်ကျူံးဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတစ်ခုဟာ ရုတ်တရတ် ထွက်လာပြီး ရှဟော်ယွမ်တို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုတိုက်ပွဲအဆုံးမှာတော့ ရှဟော်ယွမ်နှင့် သူ့သား ရှဟော်ယုံးပါ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာ ဟွမ်ကျူံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် သူဟာ 虎威將軍 ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကျားစစ်သူကြီး ၅ ဦးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဟန်မြစ်ကမ်းတိုက်ပွဲနှင့် ကျောက်ယွင် ကျားစစ်သူကြီး ဖြစ်လာခြင်း
ခရစ်နှစ် ၂၁၉ ခုနစ်မှာ လျူ ပေ့ဟာ ချောင်ချောင်ရဲ့ စစ်တပ်ကို သင့်ကျွင်းတောင်မှာ ချေမှုန်းခဲ့ပြီး ချောင်ချောင်စစ်သူကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရှဟော့ယွမ်ကိုပါ အဆိုပါတ်ိုက်ပွဲမှာ သတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ချောင်ချောင်ဟာ မကျေနပ်ပဲ လျူ ပေ့ ဟန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာ စခန်း ချထားတဲ့ သစ်တပ်စခန်းကို တိုက်ခိုက်ဖို့ စစ်သည် ၅၀၀၀၀ နဲ့ ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လျူ ပေ့ရဲ့ ကျားစစ်သူကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟွမ်ကျူံးဟာ ချောင်ချောင်ရဲ့ ရိက္ခာတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ ညဘက်မှာ သူ့စခန်းကနေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ နေထွက်ချိန်မှာ ချောင်ချောင် တပ်စခန်းကို ချည်းကပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဝေစစ်သူကြီး ကျန်းဟဲယ် မရောက်ခင်လေးမှာပဲ ရိက္ခာတွေကို မီးရှို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ချောင်ချောင်သိသွားတဲ့အခါမှာ သူ့စစ်သူကြီး ရွှယ်ဟွမ်ကို ဟွမ်ကျူံးဆုတ်ခွာတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ဟန့်တားပြီး ကြားဖြတ် တိုက်ခိုက်ဖို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွှယ်ဟွမ်လည်း အောင်မြင်စွာ ဟွမ်းကျူံးတို့ရဲ့ တပ်က်ို ကြားဖြတ်တိုက်နိုင်ပြီး ပိတ်ဆို့ကာ ဝန်းရံထားခဲ့ပါတယ်။ စခန်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ယွင်ဟာ ညကတည်းက ထွက်သွားခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီး ဟွမ်ကျူံးတစ်ယောက် နေ့လည်အထိ ပြန်မရောက်သေးလို့ စိုးရိမ်ပြီး ကျန်းယိကို စခန်း၌ အစောင့်ထားတာ ဟွမ်ကျူံးကို လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ယွင်လည်း ဟွမ်ကျူံးပိတ်မိနေတဲ့ နေရာကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး ဟွမ်ကျူံးနဲ့ သူ့တပ်သားများကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နောက် ချောင်ချောင်ဟာ ကျောက်ယွင်တို့ သစ်တပ်စခန်းကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ချီတက်လာတဲ့ သတင်းကို ကျန်းယိ ရခဲ့တဲ့အခါ ကျောက်ယွင်ဟာ သစ်တပ်စခန်းတစ်ခုလုံးကို အမိန့်ပေးလိုက်ပြီး စခန်းတွင်းရှိ ရဲတံခွန် အလံတွေ ဖြုတ်ချထားဖို့ ဂိတ်တံခါးများကို အကုန်လုံး ဖွင့်ထားရန် စစ်တပ်သုံး ဗုံများကို မတီးခက်ပဲ တ်ိတ်တိတ်နေရန် အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
"ငါတို့စခန်းက သစ်တပ်စခန်းလေး သူတို့ကို တံခါးပိတ်ခုခံလို့ မရနိုင်ဖူး။ သူတို့ ခဏလေးနဲ့ ထိုးဖောက်နိုင်လိမ့်မယ်။ ပရိယာယ်သုံးမှ ရမယ်။"
ကျောက်ယွင်ဟာ သူ့ လေးသည်တော်တွေ အကုန်လုံးကို စခန်းအပြင်မှာ နေစေပြီး သူကိုယ်တိုင်က အရှေ့ဘက်ဂိတ်မှာ အသင့်စောင့်နေပါတယ်။ ချောင်ချောင် ရောက်လာတဲ့အခါ ဂိတ်တွေ အသင့်ဖွင့်ထားတာကို တွေ့တာကြောင့် သူ့လူများကို ချူံခိုတိုက်ခိုက်ခံရမည် စိုးသဖြင့် တပ်ကို နောက်ဆုတ်စေသည်။ ထိုအခါ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသော ကျောက်ယွင်၏ တပ်သားများက ဗုံသံများကို အချက်မပြတ် ကျယ်လောင်စွာ တီးခတ်တဲ့အခါ ချောင်ချောင်၏ တပ်သားများမှာ ရုတ်တရတ် အံ့အားသင့်နေစဉ် ကျောက်ယွင်၏ လေးသည်တော်များက အဆက်မပြတ် မီးမြှားမိုးကို ရွာချလေသည်။ ထိုအခါ ဆုတ်ခွာအမိန့်ကြောင့် ကြောက်စိတ်ဝင်သွားသော စစ်သည်များမှာ ပြန်စုစည်းလို့ မရလောက်အောင် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားပြီး ဟန်မြစ်ကမ်းဘက်သို့ ဆုတ်ခွာနေစဉ် ကျောက်ယွင် ဟွမ်ကျူံး ကျန်းကျူ တို့က တဟုန်ထိုး ဝင်ရောက်ထိုးခုတ်လေသည်တွင် ချောင်ချောင်၏ တပ်မှာ ပျက်လေသည်။ ဟန်မြစ်ထဲသို့ ခုန်ချ၍ ထွက်ပြေးသူများမှာ ရေနစ်သေသူများ အချင်းချင်း နင်းမိကုန်၍ သေသူများ ကျောက်ယွင်၏ တပ်သားများ လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးသူများ များပြားလှပေသည်။ ချောင်ချောင်၏ ရိက္ခာထားသော တောင်ကို စစ်ကူလိုက်လာသော မန်သ နှင့် လျူ ဖုန်းတို့ အကုန်မီးပုံရှို့လေသည်။
အဆိုပါစစ်ပွဲတွင် ကျောက်ယွင်သည် 虎威將軍 ကျားဗိုလ် စစ်သူကြီးဘွဲ့ ရခဲ့ပြီး ကျားစစ်သူကြီး တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ လျူ ပေလည်း ထိုတိုက်ပွဲတွင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ရှုဟန်နိုင်ငံတော်ကို အုတ်မြစ်ချခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင် အင်ပါယာဘုရင်အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။
ဟွမ်ကျူံးဟာ ခရစ်နှစ် ၂၂၀ မှာတော့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူသေဆုံးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာ ဖော်ပြထားခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ သူ့မှာ သားတစ်ယောက်ရှိပေမယ့် သူ့သားကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် ဟွမ်ကျူံးရဲ့ မျိူးဆက်ဟာ ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်။
ကြားစဈသူကွီး ဟှမျကြူံး
ဟှမျကြူံးဟာ ၃ ပွညျထောငျခတျေမှာ ရှုဟနျ့ ပွညျထောငျ၏ ကြားစဈသူကွီး ၅ ဦးထဲမှ တဈဦးအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ကြားစဈသူကွီး ၅ ဦးထဲမှာ အသကျအကွီးဖွဈပမေယျ့ သူဟာ လူငယျတဈဦးကဲ့သို့ ဖွတျလကျစှာ တိုကျခိုကျနိုငျပွီး ကွံခိုငျမှုလညျး ပွညျ့ဝသလို ရငျ့ကကျြမှုလဲ အပွညျ့ရှိတာကွောငျ့ လူအမြားက ရိုသလေေးစားတဲ့ စဈသူကွီး တဈဦးလဲ ဖွဈပါတယျ။
ဟှမျကြူံး 黃忠 ဟာ 南陽 နနျးယနျဇာတိဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ မှေးခုနဈကိုတော့ မသိရပါဘူး။ သူဟာ အစပိုငျးမှာ ကငျြးပွညျနယျက လြိူပွောငျဆီမှာ နယျစောငျ့တပျမှူးစဈသူကွီးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျရပါတယျ။ သူဟာ ခနျြဆားနယျကို လြိူပွောငျရဲ့တူ လြိူဖနျနဲ့ အတူ ကာကှယျရပါတယျ။ လြိူပွောငျသဆေုံးပွီးနောကျ သူ့နရော ဆကျခံတဲ့ လြိူခြူံးဟာ ခြောငျခြောငျးထံမှာ အညံခံခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြဆားအုပျခြူ ပျရေးမှူးဟနျရှမျထံဆီ ခိုလှုံခဲ့ပါတယျ။
ကမျးပါနီတိုကျပှဲအပွီးမှာတော့ စှနျး-လြိူမဟာမိတျတပျတှဟော ကငျြးနယျကို သိမျးပိုကျဖို့ ခြီတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ကငျြးပွညျနယျဟာ အုပျခြူ ပျရေး နယျမွေ ၄ ခုနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပွီး ဟှမျကြူံးတို့ရဲ့ ခနျြဆားနယျလဲ တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ၂၁၀ ခုနဈမှာတော့ လြိူပဟေ့ာ နယျမွေ ၄ ကို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Romance of the Three Kingdoms မှာတော့ လြိူပဟေ့ာ ကှမျးယှီအား ခနျြဆားနယျကို တိုကျခိုကျဖို့ စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ ဟနျရှမျကလဲ ဟှမျကြူံးကို ဦးဆောငျစပွေီး တပျကို စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ တပျခငျြးဆုံတဲ့အခါမှာ ကှမျးယှီနဲ့ ဟှမျကြူံးတို့ စိနျချေါပွီး ၂ ဦးသား ယှဉျပွိုငျတိုကျခိုကျကွပါတယျ။ ၂ ကွိမျတိတိ အနိုငျအရှုံးမပျေါပဲ ၃ ကွိမျမွောကျမှာတော့ ဟှမျကြူံးကို ကှမျးယှီအား မွားဖွငျ့ ပဈဖို့ ဟနျရှမျက အမိနျ့ပေးခဲ့ပမေယျ့ ဟှမျကြူံးဟာ ကှမျးယှီ ခေါငျးဆောငျးကိုသာ တမငျလှဲပွီး ပဈခတျခဲ့တာကွောငျ့ ဟနျရှမျက သူ့အား သစ်စာဖောကျသညျဟုဆိုတာ ဟှမျကြူံးကို သတျပဈရနျ အမိနျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈသူကွီး ဝယေနျ အခြိနျမှီရောကျလာပွီး ဟှမျကြူံးကို မသတျဖို့ တားခဲ့ပွီး ဟနျရှမျကို ပွနျချေါသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီဗီဒီယို Link ထဲမှာ ကွညျ့ပါ။
ဒါပမေယျ့ တကယျ့အဖွဈအပကျြ သမိုငျးမှာတော့ ဟှမျကြူံးဟာ ဟနျရှမျကို လြိူပထေံ့ အညံခံဖို့ ဖွောငျးဖခြဲ့ပါတယျ။ ဟှမျကြူံးက တကယျလို့သာ စဈဖွဈရငျ လူ့အသကျပေါငျးမြားစှာ ဆုံးရှုံးနိုငျတာကွောငျ့ လြိူပထေံ့ လကျနကျခခြွငျးက အသကျပေါငျးမြားစှာကို ကယျတငျနိုငျလိမျ့မယျဟု အကွံပေးကွောငျ့ ဟနျရှမျက လကျနကျခခြဲ့ပါတယျ။ (အမှနျက အဲ့အခြိနျမှာ လြိူပရေဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရနတေဲ့အခြိနျလညျးဖွဈ နောကျပွီး သူ မငျးမြိူးနှယျ လကျရှိဘုရငျရဲ့ ဦးရီးတျောလေ)
Romance of the Three Kingdoms ဝတ်ထုထဲမှာက ဟနျရှမျကို သူ့မုနျးတီးနတေဲ့ ပွညျသူတှကေ ပုနျကနျပွီး သတျပဈခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ တကယျ့ သမိုငျးမှတျတမျးထဲမှာတော့ ပွညျသူတှကေ သူ့ကို ခဈြခငျလေးစားကွပွီး သူ့အတှကျ ဘုံကြောငျးတဈခု ဆောကျပေးထားပါတယျ။ အခုခြိနျထိ ခနျြဆားမှာ ဟနျရှမျကို ကနျတော့တဲ့ပှဲတှနေဲ့ ပူဇျောထားတာ တှနေို့ငျပါတယျ။ ခတျေအဆကျဆကျ ဟနျရှမျ ဘုံကြောငျးဟာ ပကျြဆီးခဲ့ပမေယျ့ ပွနျလညျ ပွုပွငျပွီး တညျဆောကျခဲ့ကွပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Romance of the Three Kingdoms ဟာ ဝတ်ထုတဈခုပါပဲ။ တခါတခါ ကြှနျတျောတို့ကို အဲ့ထဲက ဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ မတူလို့ဆိုပွီး လာထောကျတာတှေ ရှိလို့ ကွုံတုနျး တခါတညျး ပွောပွတာပါ။ ROTK ထဲမှာ ပါတဲ့ တခြိူ့သော ဇာတျဝငျခနျးတှကေ အပွငျမှာ မရှိခဲ့တာတှေ ထညျ့ရေးထားတာ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လြိူပထေံ့မှာ လကျခကျြခပြွီးနောကျ ဟှမျကြူံးဟာ ရှုဟနျတပျမှာ ဆကျပွီး အမှုထမျးခဲ့ပါတယျ။ လြိူပေ့ လကျအောကျမှာ စတငျပွီး မွငျတှရေ့တဲ့ တိုကျပှဲကတော့ ယိကြိူးနယျကို သိမျးပိုကျတဲ့ တိုကျပှဲမှာ သူဟာ လြိူပနေဲ့အတူ တိုကျပှဲဝငျရပါတယျ။ တိုကျပှဲတိုငျးမှာ ဟှမျကြူံးက ရှဆေုံ့းမှ ဦးဆောငျပွီး ရနျသူ့မွို့တံတိုငျးပျေါတကျလဲ သူအရငျဆုံး ရနျသူ့တိုကျကှကျကို ကြားထိုးတိုကျရငျလဲ သူကပဲ ရှဆေုံ့းက ဦးဆောငျတိုကျခိုကျတတျတာကွောငျ့ တိုကျပှဲအပွီးမှာ ရာထူးတိုးခွငျး ခံရပါတယျ။
၂၁၇ ခုနဈမှာတော့ လြိူပဟေ့ာ ခြောငျခြောငျး
ထိနျးခြူ ပျထားတဲ့ ဟနျ့ကြူံးနယျကို သိမျးပိုကျဖို့ ခြီတကျလာပါတယျ။ ဒီဟနျကြူံးတိုကျပှဲဟာ ၂၁၇ ခုနဈမှ ၂၁၉ ခုနဈအထိ ၂ နှဈကြျော ၃ နှဈနီးပါး တိုကျခဲ့ရပွီး အဆုံးမှာတော့ လြိူပတေို့ အောငျပှဲရပွီး ဟနျကြူံးဘုရငျအဖွဈ လြိူပကေ့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ဟနျကြူံးတိုကျပှဲအတှငျးမှာ ဟှမျကြူံး နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ တိုကျပှဲကတော့ သငျ့ကြှငျးတောငျခွေ တိုကျပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟနျကြူံးနယျဝငျပေါကျဖွဈတဲ့ ယနျဖငျကှမျး ဂိတျဝပေါကျကို ခြောငျခြောငျးက သူ့ရဲ့ စဈသူကွီး ရှဟျောယှမျကို အစောငျ့ထားပွီး ခုခံစပေါတယျ။ တညမှာတော့ လြိူပဟေ့ာ သငျ့ကြှငျးတောငျခွမှော စခနျးခနြတေဲ့ ရှဟျောယှမျရဲ့ တပျစခနျးကို မီးမွှားဖွငျ့ ပဈခကျတိုကျရာ ရှကေ့ာ မွငျးကာ ခံကတုတျမြား အတားအဆီးမြား မီးကြှမျးလောငျကုနျပါတယျ။ ထိုအခါ ရှဟျောယှမျဟာ တောငျဘကျဂိတျကို သူကိုယျတိုငျ စောငျ့ရှောကျပွီး ကနျြးဟဲယျကို စခနျး၏ အရှဘေ့ကျခွမျးအား ကာကှယျရနျ စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ လြိူပရေဲ့ ပငျမတပျဟာ ကနျြးဟဲယျခုခံနတေဲ့ အရှဘေ့ကျကို ဒလပျစပျ ဖိတိုကျနတေဲ့အတှကျ ကနျြးဟဲယျဟာ ရှဟျောယှမျဆီကနေ စဈကူလှမျးတောငျးရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရှဟျောယှမျက စဈကူအနညျးငယျဖွငျ့ ကနျြးဟဲယျဆီ စလှေတျပေးခဲ့ပါတယျ။ စဈကူမြား ရောကျရှိလာတာကို တှတေဲ့ ဖားကနျြ့းဟာ လြိူပကေို့ လှမျးပွောလိုကျပွီး လြိူပကေ့ ပုနျးနတေဲ့ ဟှမျကြူံးကို အခကျြပေးရနျ အသံကယျြလောငျစှာ အျောဟဈစပွေီး စဈဗုံသံမြားကို အဆကျမပွတျ တီးခကျစပေါတယျ။ ထိုအခြိနျ ရှဟျောယှမျဘကျခွမျးမှာ ဟှမျကြူံးဦးဆောငျတဲ့ တပျမတဈခုဟာ ရုတျတရတျ ထှကျလာပွီး ရှဟျောယှမျတို့ကို တိုကျခိုကျခဲ့ပါတယျ။ ထိုတိုကျပှဲအဆုံးမှာတော့ ရှဟျောယှမျနှငျ့ သူ့သား ရှဟျောယုံးပါ တိုကျပှဲမှာ ကဆြုံးခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါတိုကျပှဲမှာ ဟှမျကြူံးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကွောငျ့ သူဟာ 虎威將軍 ဖွဈလာခဲ့ပွီး ကြားစဈသူကွီး ၅ ဦးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဟနျမွဈကမျးတိုကျပှဲနှငျ့ ကြောကျယှငျ ကြားစဈသူကွီး ဖွဈလာခွငျး
ခရဈနှဈ ၂၁၉ ခုနဈမှာ လြူ ပဟေ့ာ ခြောငျခြောငျရဲ့ စဈတပျကို သငျ့ကြှငျးတောငျမှာ ခမြှေုနျးခဲ့ပွီး ခြောငျခြောငျစဈသူကွီး တဈဦးဖွဈတဲ့ ရှဟော့ယှမျကိုပါ အဆိုပါတိုကျပှဲမှာ သတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ခြောငျခြောငျဟာ မကနြေပျပဲ လြူ ပေ့ ဟနျမွဈကမျးဘေးမှာ စခနျး ခထြားတဲ့ သဈတပျစခနျးကို တိုကျခိုကျဖို့ စဈသညျ ၅၀၀၀၀ နဲ့ ခြီတကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လြူ ပရေဲ့ ကြားစဈသူကွီး တဈဦးဖွဈသူ ဟှမျကြူံးဟာ ခြောငျခြောငျရဲ့ ရိက်ခာတှကေို မီးရှို့ဖကျြဆီးဖို့ ညဘကျမှာ သူ့စခနျးကနေ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ နထှေကျခြိနျမှာ ခြောငျခြောငျ တပျစခနျးကို ခညျြးကပျနိုငျခဲ့ပွီး ဝစေဈသူကွီး ကနျြးဟဲယျ မရောကျခငျလေးမှာပဲ ရိက်ခာတှကေို မီးရှို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ခြောငျခြောငျသိသှားတဲ့အခါမှာ သူ့စဈသူကွီး ရှယျဟှမျကို ဟှမျကြူံးဆုတျခှာတဲ့ လမျးကွောငျးမှာ ဟနျ့တားပွီး ကွားဖွတျ တိုကျခိုကျဖို့ စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ ရှယျဟှမျလညျး အောငျမွငျစှာ ဟှမျးကြူံးတို့ရဲ့ တပျကို ကွားဖွတျတိုကျနိုငျပွီး ပိတျဆို့ကာ ဝနျးရံထားခဲ့ပါတယျ။ စခနျးမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ကြောကျယှငျဟာ ညကတညျးက ထှကျသှားခဲ့တဲ့ စဈသူကွီး ဟှမျကြူံးတဈယောကျ နလေ့ညျအထိ ပွနျမရောကျသေးလို့ စိုးရိမျပွီး ကနျြးယိကို စခနျး၌ အစောငျ့ထားတာ ဟှမျကြူံးကို လိုကျရှာခဲ့ပါတယျ။ ကြောကျယှငျလညျး ဟှမျကြူံးပိတျမိနတေဲ့ နရောကို ရှာတှခေဲ့ပွီး ဟှမျကြူံးနဲ့ သူ့တပျသားမြားကို ကယျတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဲ့နောကျ ခြောငျခြောငျဟာ ကြောကျယှငျတို့ သဈတပျစခနျးကို တိုကျခိုကျဖို့ ခြီတကျလာတဲ့ သတငျးကို ကနျြးယိ ရခဲ့တဲ့အခါ ကြောကျယှငျဟာ သဈတပျစခနျးတဈခုလုံးကို အမိနျ့ပေးလိုကျပွီး စခနျးတှငျးရှိ ရဲတံခှနျ အလံတှေ ဖွုတျခထြားဖို့ ဂိတျတံခါးမြားကို အကုနျလုံး ဖှငျ့ထားရနျ စဈတပျသုံး ဗုံမြားကို မတီးခကျပဲ တိတျတိတျနရေနျ အမိနျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
"ငါတို့စခနျးက သဈတပျစခနျးလေး သူတို့ကို တံခါးပိတျခုခံလို့ မရနိုငျဖူး။ သူတို့ ခဏလေးနဲ့ ထိုးဖောကျနိုငျလိမျ့မယျ။ ပရိယာယျသုံးမှ ရမယျ။"
ကြောကျယှငျဟာ သူ့ လေးသညျတျောတှေ အကုနျလုံးကို စခနျးအပွငျမှာ နစေပွေီး သူကိုယျတိုငျက အရှဘေ့ကျဂိတျမှာ အသငျ့စောငျ့နပေါတယျ။ ခြောငျခြောငျ ရောကျလာတဲ့အခါ ဂိတျတှေ အသငျ့ဖှငျ့ထားတာကို တှတေ့ာကွောငျ့ သူ့လူမြားကို ခြူံခိုတိုကျခိုကျခံရမညျ စိုးသဖွငျ့ တပျကို နောကျဆုတျစသေညျ။ ထိုအခါ အသငျ့စောငျ့ဆိုငျးနသေော ကြောကျယှငျ၏ တပျသားမြားက ဗုံသံမြားကို အခကျြမပွတျ ကယျြလောငျစှာ တီးခတျတဲ့အခါ ခြောငျခြောငျ၏ တပျသားမြားမှာ ရုတျတရတျ အံ့အားသငျ့နစေဉျ ကြောကျယှငျ၏ လေးသညျတျောမြားက အဆကျမပွတျ မီးမွှားမိုးကို ရှာခလြသေညျ။ ထိုအခါ ဆုတျခှာအမိနျ့ကွောငျ့ ကွောကျစိတျဝငျသှားသော စဈသညျမြားမှာ ပွနျစုစညျးလို့ မရလောကျအောငျ ဖရိုဖရဲ ဖွဈသှားပွီး ဟနျမွဈကမျးဘကျသို့ ဆုတျခှာနစေဉျ ကြောကျယှငျ ဟှမျကြူံး ကနျြးကြူ တို့က တဟုနျထိုး ဝငျရောကျထိုးခုတျလသေညျတှငျ ခြောငျခြောငျ၏ တပျမှာ ပကျြလသေညျ။ ဟနျမွဈထဲသို့ ခုနျခြ၍ ထှကျပွေးသူမြားမှာ ရနေဈသသေူမြား အခငျြးခငျြး နငျးမိကုနျ၍ သသေူမြား ကြောကျယှငျ၏ တပျသားမြား လကျခကျြကွောငျ့ သဆေုံးသူမြား မြားပွားလှပသေညျ။ ခြောငျခြောငျ၏ ရိက်ခာထားသော တောငျကို စဈကူလိုကျလာသော မနျသ နှငျ့ လြူ ဖုနျးတို့ အကုနျမီးပုံရှို့လသေညျ။
အဆိုပါစဈပှဲတှငျ ကြောကျယှငျသညျ 虎威將軍 ကြားဗိုလျ စဈသူကွီးဘှဲ့ ရခဲ့ပွီး ကြားစဈသူကွီး တဈဦး ဖွဈလာခဲ့လသေညျ။ လြူ ပလေညျး ထိုတိုကျပှဲတှငျ အောငျနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ ရှုဟနျနိုငျငံတျောကို အုတျမွဈခခြဲ့ပွီး သူကိုယျတိုငျ အငျပါယာဘုရငျအဖွဈ ကွညောခဲ့သညျ။
ဟှမျကြူံးဟာ ခရဈနှဈ ၂၂၀ မှာတော့ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ သူသဆေုံးတာနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ဆိုတာ ဖျောပွထားခွငျးတော့ မရှိပါဘူး။ သူ့မှာ သားတဈယောကျရှိပမေယျ့ သူ့သားကလညျး ငယျစဉျကတညျးက သဆေုံးခဲ့တာကွောငျ့ ဟှမျကြူံးရဲ့ မြိူးဆကျဟာ ပြောကျကှယျသှားရပါတယျ။
နန်ကျင်းမြို့အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း 南京大屠殺 Nan Jing Massacre
11:17 PM C-Knowledge , Chinese
မှတ်ချက်။ ။ မိန်းကလေးများနှင့် ကြောက်တတ်သူများ ဖတ်ရန်မသင့်တော်ပါ။ War Crime အကြောင်း ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Credit - SwamHtet(မှတ်စုကြမ်း) 天下第一
တရုတ်နှင့် ဂျပန်ဆက်ဆံရေးတွင် ယနေ့ချိန်ထိ ပြေလည်မှု မရသေးသည့် ကိစ္စရပ်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော နန်ကျင်းလူသတ်ပွဲမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မစတင်မီ ၁၉၃၇ ခုနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တရုတ်-ဂျပန်စစ်ပွဲအတွင်း ဂျပန်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုကြီး ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရာဇဝတ်မှုများသည် နန်ကျင်းမြို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ရရှိခဲ့သော ၁၉၃၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါမြို့ ဂျပန်တော်ဝင်တပ်တော်မှ စစ်သားများသည် နန်ကျင်းမြို့သူမြို့သားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း နှိပ်စက်ခြင်းများ အမျိူးသမီးများကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း စသည့် ရာဇဝတ်မှုများ
ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်တမ်းများအရ လူပေါင်း ၃ သိန်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာတို့မှာလည်း လုယက်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး မြို့လုံးကျွတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယနေ့ထိ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည့် ကိစ္စတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၃၇ ခုနစ်တွင် ဂျပန်တို့ တရုတ်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရှန်ဟိုင်း နန်ကျင်း စသည့် တရုတ်တို့၏ မြို့ကြီးများ ဂျပန်လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂျပန် တော်ဝင်မိသားစုမှ မင်းသား အာဆာကာ ဦးဆောင်သော ဂျပန်တပ်ဖွဲ့များသည် နန်ကျင်းကို အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ၁၉၃၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နန်ကျင်းမြို့ ဂျပန်လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။ မြို့ကို သိမ်းပြီးချိန်မှာတော့ အနောက်နိုင်ငံသား ၂၇ ဦးကို ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၂၇ ဦးထဲမှ ၅ ဦးကတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုများ
နန်ကျင်းမြို့ကျပြီး ၆ ပတ်အကြာမှာတော့ မြို့မှာ ဂျပန်တို့ရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို စတင်တွေ့လာရပါတယ်။ မင်းသား အာဆာကာ ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ စစ်သုံ့ပန်းတွေကို အကုန်သတ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ဂျပန်စစ်ဗိုလ် ၂ ယောက်ရဲ့ လူအယောက် ၁၀၀ ကို ပြိုင်သတ်တဲ့ သတင်းကတော့ သတင်းခေါင်းစီးအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၃၇ ခုနစ်ထုတ် အိုဆာကာ မီနီချီ ရှင်ဘွန်း သတင်းစာ၏ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ဂျပန်အရာရှိ ၂ ဦးဖြစ်သော တိုရှီအာကီ မူခိုင်နှင့်
တာရှီယိုရှီ နိုဒါးတို့ ဓားနဲ့ လူအယောက် ၁၀၀ ကို ဘယ်သူအရင်ဆုံးပြည့်အောင် သတ်နိုင်လဲဆိုတာ ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါပြိုင်တွင် မူခိုင်က ၁၀၆ ဦးနှင့် နိုဒါးက ၁၀၅ သတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန်တွေ စစ်ရှုံးလို့ လက်နက်ချရတဲ့အခါ အဆိုပါ မူခိုင်နဲ့ နိုဒါးတို့ ၂ ယောက်ဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီး ပြည့်သူဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး နန်ကျင်းမြို့မှာပဲ သေနတ်တေ့ပြီး ကွပ်မျက်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်မှုများ
နန်ကျင်းမြို့မှာ ဂျပန်စစ်တပ်ဟာ လူသတ်မှုများ မုဒိန်းမှု ရာပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇဝတ်မှု မှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။ အနည်းဆုံး အမျိူးသမီး ၂၀၀၀၀ လောက်ဟာ အဓမ္မကျင့်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေများရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ အမျိူးသမီးများမှာ အသက် ၅ နှစ်လောက်စပြီး အသက်ကြီး အဘွားအရွယ်တွေထိ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နန်ကျင်းမြို့ထဲ ဂျပန်တွေ ဝင်လာချိန်မှာတော့ စစ်သားတွေဟာ တအိမ်တက် တအိမ်ဆင်း ရှာဖွေကြပြီး ဖမ်းခံရတဲ့ အမျိူးသမီးများကို အုပ်စုဖွဲ့မုဒိန်းမှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံရတဲ့ အမျိူးသမီးများကို ထိုနေရာမှာတင် ချက်ချင်းပဲ သတ်ဖြတ်ခဲ့လေ့ ရှိပါတယ်။ တချိူ့ ရက်စက်သော စစ်သားများမှာ အမျိူးသမီး ယောနိကို Baynets (လှံစွပ်) ဖြင့်သော်၎င်း ဝါးချွန် သို့မဟုတ် တခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ရက်စက်မှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသငယ်များအပေါ် ပိုမိုရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် အဓမ္မကျင့်ပြီးပါက ယောနိမှ ရင်ခေါင်းအထိ ခွဲကာ သတ်ပစ်လေ့ ရှိသည်။
အရပ်သားများအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း
နန်ကျင်းမြို့ကို စသိမ်းပြီးကတည်းက မြို့တွင်း မြို့ပြင်မှာ ခုခံသူ တရုတ်စစ်သည်အလောင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်လောက်ဟာ ယန်ကျစ်မြစ်ကမ်း တလျောက်နဲ့ မြို့ထဲမှာပါ ပြန့်ကြဲနေခဲ့ပါတယ်။ အရပ်သားများကိုလည်း ဂျပန်စစ်သားများက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး အမျိူးသားများကို နှိပ်စက်ပြီးမှ သတ်ဖြတ်ကြသလို အမျိူးသမီးများနှင့် ကလေးငယ် မွေးကင်းစများပါမကျန် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး သတ်ဖြတ်ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကို ဝမ်းဗိုက်နေရာအား လှံစွပ်ဖြင့် ထိုးသတ်၍၄င်း မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်၎င်း သတ်လေ့ရှိသည်။
ဂျပန်ရေတပ်အရာရှိ ရှိုမိတာအီရဲ့ မှတ်တမ်းမှာတော့ "ဂျပန်ကြည်းတပ်က အသံချဲ့စက်နဲ့ အမိန့်တွေ ပေးနေတယ်ဗျ။ ထွက်ပြေးတဲ့ တရုတ်မှန်သမျှ အကုန်သတ်ပစ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ အများစုကတော့ အဖမ်းခံရပြီး လူတစ်သောင်းဆန့်မြောင်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ကျင်းတွေရှေ့မှာပဲ သတ်ဖြတ်ခံရပြီး မြှုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျင်းအကျယ်က မီတာ ၃၀၀ X ၅ မီတာ အချင်းရှိတဲ့ ကျင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ အနည်းဆုံး လူ ၄၀၀၀ ကနေ ၁ သောင်းကျော်ကို မြှုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။" လို့ မှတ်တမ်းတင် ရေးသားထားပါတယ်။
အရပ်သားများကို ကိုယ်တိုင်ကျင်းတူးခိုင်းပြီး အဲ့ကျင်းထဲကို အရှင်လတ်လတ် မြှုပ်နှံတာတွေ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ စစ်သားတွေကို နိုင်ငံတကာ စစ်သုံ့ပန်းကို ဆက်ဆံရမယ့် ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး နေ့စဉ် ခေါင်းဖြတ်သတ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ စစ်သုံ့ပန်းများကို မြစ်ကမ်းဘေးကို မျက်နှာမူခိုင်းထားပြီး တစ်ယောက်လက် တယောက်တွဲခိုင်းထားကာ စက်သေနတ်ဖြင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရပ်သားနဲ့ တရုတ်စစ်သုံ့ပန်းများ ၁၃၀၀ က်ိုတော့ Tai Ping ဂိတ်ဝမှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မြေမြှုပ်မိုင်း ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းကွင်းကို ဖြတ်သန်းစေကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်။ အများစုက သေကုန်ကြပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို လှံစွပ်ဖြင့် ထပ်မံထိုးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်သုံ့ပန်းများကို လှံစွပ်ဖြင့် ထိုးသတ်စဉ် ဂျပန်စစ်သီချင်းများ ဖွင့်ထားကြပါတယ်။ ထိုစဉ်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဂျပန် စစ်သီချင်းထဲက တချိူ့ကို အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားပါတယ်။ ဂျပန်အရာရှိ တချိူ့ကတော့ စစ်သုံ့ပန်းများနဲ့ ဓားရေးယှဉ်ကြပြီး နိုင်ရင် လွှတ်ပေးလို့ ဆိုကြပေမယ့် ဓားရေးကောင်းတဲ့ အရာရှိတွေကိုတော့ နိုင်တဲ့လူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နန်ကျင်းမြို့တိုက်ပွဲပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ တရုတ်စစ်သုံ့ပန်း ၅၇၅၀၀ ကျော်လောက်ဟာ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
နယူးယောက်တိုင်း The New York Times သတင်းထောက် F. Tillman Durdin ဟာ သူအဖမ်းမခံရစဉ် နန်ကျင်းမြို့အခြေအနေကို The New York Times သတင်းစာတိုက်ကို အခုလို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော် ရုတ်တရတ် စက်သေနတ် ဝေ့လိုက်တဲ့ အသံကို ကြားလိုက်တယ်ဗျ။ ဂျပန်စစ်သားတွေဟာ ၁၀ မိနစ်လောက် ပစ်ခတ်နေတယ်။ ခနကြာတော့ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးငယ် အပါအဝင် လူ ၂၀၀ လောက် အသက်မဲ့နေကြပြီ။ Tai Ping ဂိတ်မှာလည်း လူ ၆ ယောက်ကို ဆွဲကြိုးချပြီး သတ်ခဲ့သေးတယ်။ ဒီတိုင်း တန်းလန်းကြီး ထားခဲ့ကြတယ်။ တခါတလေ တင့်ဖျက်အမြောက်တွေနဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပစ်သတ်တာတွေ ရှိသေးတယ်။"
"ဂျပန်စစ်သားတွေက တရုတ်စစ်သုံ့ပန်းတွေကို အရသာခံပြီး သတ်ကြတယ်။ တချိူ့ ရက်စက်တဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေဟာ စစ်သုံ့ပန်းတွေကို သတ်ပြီး အသည်းနဲ့ နှလုံးကို ထုတ်ယူပြီး မီးကင်စားကြတယ်။"
သိပ်မကြာခင်မှာတော့ Durdin တို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို နန်ကျင်းစစ်မဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာဟာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားပေမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လူသတ်မှု မုဒိန်းမှု လုယက်မှုတွေဟာ အဆိုပါ စစ်မဲ့ဇုန်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။ ဂျပန်တွေဟာ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
၁၉၃၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ ဂျပန်စစ်သံရုံးကို နိုင်ငံပေါင်းချူ ပ်အသင်းကြီးက ခေါ်ယူခဲ့ပြီး နန်ကျင်းမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှုတွဲပေါင်း ၄၅၀ ခန့် ပါဝင်တဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ဂျာမနီ ဗြိတိန် အမေရိကန် သံရုံးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သံတမန်များကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ ညမှာတော့ ဂျပန်စစ်သားများ အိမ်တွေကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကြပြီး အမျိူးသမီးများ ခေါ်ယူသွားခြင်း သို့မဟုတ် ထိုနေရာမှာပင် အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ထိတ်လန့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အမျိူးသမီးငယ် တချိူ့ဟာ GinLing ကောလိပ်ပရဝုဏ်ထဲသို့ ပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ညအချိန်မှာတော့ ဂျပန်စစ်သားတွေဟာ နန်ကျင်းတက္ကသိုလ်ဝန်းထဲ ဝင်ရောက်လာပြီး နန်ကျင်းတက္ကသိုလ် Tao Yuan အဆောက်အအုံထဲမှာ အမျိူးသမီး ၃၀ ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြပြီး တချိူ့ကတော့ ၆ ယောက်ခန့် ပြုကျင့်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၄ နာရီခန့် အချိန် အမှတ် ၁၀၁ Ho Lu အိမ်နားမှာ ဂျပန်စစ်သား တစ်ယောက်ဟာ တရုတ်အမျိူးသားထံကနေ ဆေးလိပ်တောင်းရာ တရုတ်အမျိူးသား ဆေးလိပ် ထုတ်ပေးတာ ကြာတယ်ဟုဆိုပြီး ဦးခေါင်းကို လှံစွပ်ဖြင့် ထိုးခဲ့ပါတယ်။ အခု သူ့ကို ဆေးရုံတင်ထားပေမယ့် အသက်ရှင်ဖို့တော့ မသေချာပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာပဲ မိန်းကလေး ၇ ဦး (အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၂၁ နှစ်ကြား) ဂျပန်စစ်တပ်ဝန်းထဲကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ၅ ဦး ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ၇ ကြိမ် ၈ ကြိမ်ခန့် အဓမ္မပြုကျင့်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
83 လမ်းနဲ့ 85 လမ်းမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ဒုက္ခသည် ၅၄၀ ခန့် ရှိပြီး အမျိူးသမီးနဲ့ မိန်းကလေး ၃၀ ခန့်ဟာ မုဒိန်းကျင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ညတိုင်း ကြောက်လန့်မှုတွေကြားမှာ ငိုယိုရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခြေအနေက ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားတာထက် ဆိုးရွားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံး အကူညီပေးသင့်ပါတယ်။
လျှိူလို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းရှေ့မှာ ဂျပန်စစ်သားက ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အသက်ဟာ ၁၄ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။
Rabe ရဲ့ မှတ်တမ်းမှာတော့ ကယ်ဆယ်ရမယ့် တရုတ် ဒုက္ခသည်စာရင်းဟာ ၂ သိန်းကနေ ၂ သိန်းခွဲထိ ရှိနေတယ်လို့ အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ Rabe ဟာ Siemens AG Chinese Corporation က Nanking Safety Zone စစ်အတွင်းက ဘေးကင်းမှုဇုန်ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဂျာမန်လူမျိူး John Rabe ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့သို့ စီရင်ခံစားများကြောင့် နိုင်ငံတကာက ရှုံချခဲ့ကြပြီးနောက် ၁၉၃၈ ဇန်နဝါရီလမှာတော့ ဂျပန်စစ်တပ်ဟာ နန်ကျင်းဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ပြည်သူများကို အိမ်ပြန်သွားဖို့ အင်အားသုံးပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ မြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် အမိန့်စာကို ကြော်ညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်မှုများ နည်းပါးသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်းချူ ပ်အသင်းကြီးမှ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပိုမို လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။
စစ်ပြီးနောက် နန်းကျင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက် စီရင်ချက်များ
စစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မင်းသား အာဆာကာကို တော်ဝင်သွေးအဖြစ်ကနေ သာမန်အရပ်သားအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တခြား အဆင့်မြင့်အရာရှိ ၅ ဦးလောက်ကို ကြိုးပေးပြစ်ဒဏ်အဖြစ် သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကြီးပြီးနောက် ဂျပန်တို့၏ ဝန်ချတောင်းပန်မှုများ
၁၉၉၅ သြဂတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ဂျပန်တို့ လက်နက်ချတာ ၅၅ နှစ်ပြည့်မှာတော့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချူ ပ် တိုမီအီချီ မူယာရာမ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အတွင်း အာရှနိုင်ငံများမှာ ဂျပန်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုများအတွက် များစွာဝမ်းနည်းရပါကြောင်းကို ဝန်ချတောင်းပန်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ဘုရင်ကလည်း ဂျပန် စစ်တပ်ရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ လူအများအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့် ဝန်ချတောင်းပန်မှုကို တရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ကတော့ ဒါဟာ လုံလောက်တဲ့ ဝန်ချတောင်းပန်မှု မဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နန်ကျင်းပြည်သူတွေကို သီးသန့် ဝန်ချတောင်းပန်တာတွေ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုးရီးယားမှာ လိင်ကျွန်အဖြစ် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ အမျိူးသမီးများဟာ ယနေ့ချိန်ထိ ဂျပန်အစိုးရဟာ သူတို့လို လိင်ကျွန်အဖြစ် အဓမ္မ စေခိုင်းခံရတဲ့ လူတွေအတွက် သီးသန့် ဝန်ချတောင်းပန်တာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ယနေ့တိုင် နန်ကျင်းမြို့ရဲ့ တချိူ့နေရာတွေမှာ တူးဖော်ပါက အရိုးစုများစွာကို မြင်တွေ့နေရဆဲလို့ ပြောကြပါတယ်။ နန်ကျင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှု အောက်မေ့ဖွယ်ပြတိုက်မှာတော့ တူးဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ ကျင်းများထဲမှ အရိုးစုများနဲ့ တခြားအောက်မေ့ဖွယ် ပစ္စည်းများကို ပြသထားတာ တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု နန်းကျင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုကို ရေးရခြင်း အကြောင်းအရင်းဟာ စစ်ရဲ့ ဆိုးရွားလှပုံ စစ်ပွဲရဲ့ အကျိူးဆက်များ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခရောက်ပုံ စစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုတာ မကျူးလွန်သင့်ကြောင်း စတာတွေကို အသိပညာပေးစေလိုသော စိတ်ဖြင့်သာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းမှု ရှိပါက ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုကြမ်းမှ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ပုံတွေကို တပုံချင်းစီ ထောက်ကြည့်ပေးပါ။ စာမဆန့်လို့ ပုံနှင့်စာ တွဲရေးထားပါတယ်။
၁၉၃၇ ခုနစ်ထုတ် အိုဆာကာ မီနီချီ ရှင်ဘွန်း သတင်းစာ၏ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ဂျပန်အရာရှိ ၂ ဦးဖြစ်သော တိုရှီအာကီ မူခိုင်နှင့် တာရှီယိုရှီ နိုဒါးတို့ ဓားနဲ့ လူအယောက် ၁၀၀ ကို ဘယ်သူအရင်ဆုံး ပြည့်အောင် သတ်နိုင်လဲဆိုတာ ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါပြိုင်တွင် မူခိုင်က ၁၀၆ ဦးနှင့် နိုဒါးက ၁၀၅ သတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန်တွေ စစ်ရှုံးလို့ လက်နက်ချရတဲ့အခါ အဆိုပါ မူခိုင်နဲ့ နိုဒါးတို့ ၂ ယောက်ဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီး ပြည့်သူဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး နန်ကျင်းမြို့မှာပဲ သေနတ်တေ့ပြီး ကွပ်မျက်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၃၇ ခုနဈထုတျ အိုဆာကာ မီနီခြီ ရှငျဘှနျး သတငျးစာ၏ ခေါငျးကွီးပိုငျးတှငျ ဂပြနျအရာရှိ ၂ ဦးဖွဈသော တိုရှီအာကီ မူခိုငျနှငျ့ တာရှီယိုရှီ နိုဒါးတို့ ဓားနဲ့ လူအယောကျ ၁၀၀ ကို ဘယျသူအရငျဆုံး ပွညျ့အောငျ သတျနိုငျလဲဆိုတာ ပွိုငျခဲ့ကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါပွိုငျတှငျ မူခိုငျက ၁၀၆ ဦးနှငျ့ နိုဒါးက ၁၀၅ သတျနိုငျခဲ့ကွောငျး ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ ဂပြနျတှေ စဈရှုံးလို့ လကျနကျခရြတဲ့အခါ အဆိုပါ မူခိုငျနဲ့ နိုဒါးတို့ ၂ ယောကျဟာ စဈရာဇဝတျမှုဖွငျ့ စှဲခကျြတငျခံရပွီး ပွညျ့သူဘုံရနျသူအဖွဈ သတျမှတျပွီး နနျကငျြးမွို့မှာပဲ သနေတျတပွေီ့း ကှပျမကျြခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
ပုံမှာ XinLuKou အရပ် အိမ်အမှတ် ၅ ကို ဂျပန်စစ်သား ၃၀ ခန့် ရောက်ရှိလာပြီး အိမ်မှာ ရှိတဲ့ မိသားစုတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် အိမ်မှာရှိတဲ့ အမျိူးသမီးကြီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ၁၀ နှစ်အောက် မိန်းကလေးငယ် ၂ ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြပြီး အမျိူးသမီးကြီးကိုတော့ ပုလင်းဖြင့် ယောနိကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်ခဲ့ကြပြီး တကိုယ်လုံးကိုလည်း ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၈ နှစ်အရွယ် သူ့သမီးလေးကို အုပ်စုဖွဲ့ ပြုကျင့်ခဲ့ကြပြီးနောက် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး သူ့ညီမကတော့ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ နန်ကျင်းကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သတင်းထောက် ဂျွန်မက်ဂီဟာ ၂ ပတ်အကြာမှာ သူတို့မိသားစုကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး အလောင်းတွေကို ပုံပါအတိုင်း စွန့်ပစ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှာ XinLuKou အရပျ အိမျအမှတျ ၅ ကို ဂပြနျစဈသား ၃၀ ခနျ့ ရောကျရှိလာပွီး အိမျမှာ ရှိတဲ့ မိသားစုတှကေို သတျပဈခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ အိမျမှာရှိတဲ့ အမြိူးသမီးကွီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ၁၀ နှဈအောကျ မိနျးကလေးငယျ ၂ ဦးကို အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့ကွပွီး အမြိူးသမီးကွီးကိုတော့ ပုလငျးဖွငျ့ ယောနိကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရိုကျခဲ့ကွပွီး တကိုယျလုံးကိုလညျး ကွိမျဖွငျ့ ရိုကျခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ၈ နှဈအရှယျ သူ့သမီးလေးကို အုပျစုဖှဲ့ ပွုကငျြ့ခဲ့ကွပွီးနောကျ အသကျ ၈ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးဟာ သဆေုံးသှားခဲ့ပွီး သူ့ညီမကတော့ အသကျရှငျခဲ့ပါတယျ။ နနျကငျြးကို ရောကျရှိနတေဲ့ သတငျးထောကျ ဂြှနျမကျဂီဟာ ၂ ပတျအကွာမှာ သူတို့မိသားစုကို ရှာတှခေဲ့ပွီး အလောငျးတှကေို ပုံပါအတိုငျး စှနျ့ပဈထားခဲ့ပါတယျ။
ကလေးငယ်များအား သတ်ဖြတ်ပြီး စွန့်ပစ်ထားခဲ့ပုံ
ကလေးငယျမြားအား သတျဖွတျပွီး စှနျ့ပဈထားခဲ့ပုံ
နန်းကျင်းမြို့ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်
နနျးကငျြးမွို့ ဝမျးနညျးခွငျးအထိမျးအမှတျ ကြောကျတိုငျ
南京大屠殺 Nan Jing Massacre
မှတျခကျြ။ ။ မိနျးကလေးမြားနှငျ့ ကွောကျတတျသူမြား ဖတျရနျမသငျ့တျောပါ။ War Crime အကွောငျး ရေးသားထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
တရုတျနှငျ့ ဂပြနျဆကျဆံရေးတှငျ ယနခြေိ့နျထိ ပွလေညျမှု မရသေးသညျ့ ကိစ်စရပျမြားထဲတှငျ တဈခုအပါအဝငျဖွဈသော နနျကငျြးလူသတျပှဲမှာ ဒုတိယကမ်ဘာစဈ မစတငျမီ ၁၉၃၇ ခုနဈတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော တရုတျ-ဂပြနျစဈပှဲအတှငျး ဂပြနျတို့ ကြူးလှနျခဲ့သညျ့ စဈရာဇဝတျမှုကွီး ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ရာဇဝတျမှုမြားသညျ နနျကငျြးမွို့ကို သိမျးပိုကျခဲ့ရရှိခဲ့သော ၁၉၃၇ ဒီဇငျဘာ ၁၃ ရကျမှ စတငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အဆိုပါမွို့ ဂပြနျတျောဝငျတပျတျောမှ စဈသားမြားသညျ နနျကငျြးမွို့သူမွို့သားမြားကို သတျဖွတျခွငျး နှိပျစကျခွငျးမြား အမြိူးသမီးမြားကို မုဒိနျးကငျြ့ သတျဖွတျခွငျး စသညျ့ ရာဇဝတျမှုမြား
ကြူးလှနျခဲ့ကွသညျ။ မဟာမိတျတပျမြား၏ စဈတမျးမြားအရ လူပေါငျး ၃ သိနျးနီးပါး သဆေုံးခဲ့ပွီး ပစ်စညျးဥစ်စာတို့မှာလညျး လုယကျခွငျး ခံခဲ့ရပွီး မွို့လုံးကြှတျ သတျဖွတျခွငျးကိုလညျး ခံခဲ့ရသညျ့အတှကျ တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ ယနထေိ့ မကမြေနပျဖွဈနသေညျ့ ကိစ်စတဈခုလညျး ဖွဈပါသညျ။
၁၉၃၇ ခုနဈတှငျ ဂပြနျတို့ တရုတျနိုငျငံထဲသို့ ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျခဲ့ရာ ရှနျဟိုငျး နနျကငျြး စသညျ့ တရုတျတို့၏ မွို့ကွီးမြား ဂပြနျလကျအောကျသို့ ရောကျရှိခဲ့သညျ။ ဂပြနျ တျောဝငျမိသားစုမှ မငျးသား အာဆာကာ ဦးဆောငျသော ဂပြနျတပျဖှဲ့မြားသညျ နနျကငျြးကို အပွငျးအထနျ ထိုးစဈဆငျပွီး တိုကျခိုကျခဲ့ရာ ၁၉၃၇ ဒီဇငျဘာ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ နနျကငျြးမွို့ ဂပြနျလကျအောကျသို့ ကရြောကျခဲ့သညျ။ မွို့ကို သိမျးပွီးခြိနျမှာတော့ အနောကျနိုငျငံသား ၂၇ ဦးကို ထှကျခှာခှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ အဆိုပါ ၂၇ ဦးထဲမှ ၅ ဦးကတော့ ဂြာနယျလဈတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျမှုမြား
နနျကငျြးမွို့ကပြွီး ၆ ပတျအကွာမှာတော့ မွို့မှာ ဂပြနျတို့ရဲ့ စဈရာဇဝတျမှုမြားကို စတငျတှလေ့ာရပါတယျ။ မငျးသား အာဆာကာ ကိုယျတိုငျ ဖမျးဆီးရမိတဲ့ စဈသုံ့ပနျးတှကေို အကုနျသတျပဈဖို့ အမိနျ့ပေးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲ့ထဲမှာ ဂပြနျစဈဗိုလျ ၂ ယောကျရဲ့ လူအယောကျ ၁၀၀ ကို ပွိုငျသတျတဲ့ သတငျးကတော့ သတငျးခေါငျးစီးအဖွဈ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
၁၉၃၇ ခုနဈထုတျ အိုဆာကာ မီနီခြီ ရှငျဘှနျး သတငျးစာ၏ ခေါငျးကွီးပိုငျးတှငျ ဂပြနျအရာရှိ ၂ ဦးဖွဈသော တိုရှီအာကီ မူခိုငျနှငျ့
တာရှီယိုရှီ နိုဒါးတို့ ဓားနဲ့ လူအယောကျ ၁၀၀ ကို ဘယျသူအရငျဆုံးပွညျ့အောငျ သတျနိုငျလဲဆိုတာ ပွိုငျခဲ့ကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါပွိုငျတှငျ မူခိုငျက ၁၀၆ ဦးနှငျ့ နိုဒါးက ၁၀၅ သတျနိုငျခဲ့ကွောငျး ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ ဂပြနျတှေ စဈရှုံးလို့ လကျနကျခရြတဲ့အခါ အဆိုပါ မူခိုငျနဲ့ နိုဒါးတို့ ၂ ယောကျဟာ စဈရာဇဝတျမှုဖွငျ့ စှဲခကျြတငျခံရပွီး ပွညျ့သူဘုံရနျသူအဖွဈ သတျမှတျပွီး နနျကငျြးမွို့မှာပဲ သနေတျတပွေီ့း ကှပျမကျြခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
မုဒိနျးမှု ကြူးလှနျမှုမြား
နနျကငျြးမွို့မှာ ဂပြနျစဈတပျဟာ လူသတျမှုမြား မုဒိနျးမှု ရာပေါငျးမြားစှာ ကြူးလှနျခဲ့တယျလို့ နိုငျငံတကာ စဈရာဇဝတျမှု မှတျတမျးမြားက ဆိုပါတယျ။ အနညျးဆုံး အမြိူးသမီး ၂၀၀၀၀ လောကျဟာ အဓမ်မကငျြ့ခွငျး ခံခဲ့ရတယျလို့ မကျြမွငျသကျသမြေားရဲ့ ထှကျဆိုခကျြမြားအရ သိရှိရပါတယျ။ မုဒိနျးကငျြ့ခံရတဲ့ အမြိူးသမီးမြားမှာ အသကျ ၅ နှဈလောကျစပွီး အသကျကွီး အဘှားအရှယျတှထေိ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
နနျကငျြးမွို့ထဲ ဂပြနျတှေ ဝငျလာခြိနျမှာတော့ စဈသားတှဟော တအိမျတကျ တအိမျဆငျး ရှာဖှကွေပွီး ဖမျးခံရတဲ့ အမြိူးသမီးမြားကို အုပျစုဖှဲ့မုဒိနျးမှုမြား ကြူးလှနျခဲ့ကွပါတယျ။ အဓမ်မ ပွုကငျြ့ခံရတဲ့ အမြိူးသမီးမြားကို ထိုနရောမှာတငျ ခကျြခငျြးပဲ သတျဖွတျခဲ့လေ့ ရှိပါတယျ။ တခြိူ့ ရကျစကျသော စဈသားမြားမှာ အမြိူးသမီး ယောနိကို Baynets (လှံစှပျ) ဖွငျ့သျော၎င်းငျး ဝါးခြှနျ သို့မဟုတျ တခွားသော နညျးလမျးမြားဖွငျ့ ရကျစကျမှာ သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ကလေးသငယျမြားအပျေါ ပိုမိုရကျစကျစှာ သတျဖွတျကွသညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အဓမ်မကငျြ့ပွီးပါက ယောနိမှ ရငျခေါငျးအထိ ခှဲကာ သတျပဈလေ့ ရှိသညျ။
အရပျသားမြားအပျေါ စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျခွငျး
နနျကငျြးမွို့ကို စသိမျးပွီးကတညျးက မွို့တှငျး မွို့ပွငျမှာ ခုခံသူ တရုတျစဈသညျအလောငျး ၆၀၀၀၀ ကြျောလောကျဟာ ယနျကဈြမွဈကမျး တလြောကျနဲ့ မွို့ထဲမှာပါ ပွနျ့ကွဲနခေဲ့ပါတယျ။ အရပျသားမြားကိုလညျး ဂပြနျစဈသားမြားက တိုကျခိုကျခဲ့ကွပွီး အမြိူးသားမြားကို နှိပျစကျပွီးမှ သတျဖွတျကွသလို အမြိူးသမီးမြားနှငျ့ ကလေးငယျ မှေးကငျးစမြားပါမကနျြ သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားနှငျ့ မှေးကငျးစ ကလေးငယျမြားကို ပဈမှတျထားပွီး သတျဖွတျကွသညျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားကို ဝမျးဗိုကျနရောအား လှံစှပျဖွငျ့ ထိုးသတျ၍၎င်းငျး မုဒိနျးကငျြ့ သတျဖွတျခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး သတျလရှေိ့သညျ။
ဂပြနျရတေပျအရာရှိ ရှိုမိတာအီရဲ့ မှတျတမျးမှာတော့ "ဂပြနျကွညျးတပျက အသံခြဲ့စကျနဲ့ အမိနျ့တှေ ပေးနတေယျဗြ။ ထှကျပွေးတဲ့ တရုတျမှနျသမြှ အကုနျသတျပဈ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ကွားနရေတယျ။ အမြားစုကတော့ အဖမျးခံရပွီး လူတဈသောငျးဆနျ့မွောငျးလို့ အမညျပေးထားတဲ့ ကငျြးတှရှေမှေ့ာပဲ သတျဖွတျခံရပွီး မွှုပျခဲ့ကွတယျ။ ကငျြးအကယျြက မီတာ ၃၀၀ X ၅ မီတာ အခငျြးရှိတဲ့ ကငျြးတှဖွေဈပွီးတော့ အနညျးဆုံး လူ ၄၀၀၀ ကနေ ၁ သောငျးကြျောကို မွှုပျနှံထားခဲ့ပါတယျ။" လို့ မှတျတမျးတငျ ရေးသားထားပါတယျ။
အရပျသားမြားကို ကိုယျတိုငျကငျြးတူးခိုငျးပွီး အဲ့ကငျြးထဲကို အရှငျလတျလတျ မွှုပျနှံတာတှေ ဖမျးဆီးရမိတဲ့ စဈသားတှကေို နိုငျငံတကာ စဈသုံ့ပနျးကို ဆကျဆံရမယျ့ ဥပဒကေို မကျြကှယျပွုပွီး နစေ့ဉျ ခေါငျးဖွတျသတျတာတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ စဈသုံ့ပနျးမြားကို မွဈကမျးဘေးကို မကျြနှာမူခိုငျးထားပွီး တဈယောကျလကျ တယောကျတှဲခိုငျးထားကာ စကျသနေတျဖွငျ့ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သတျဖွတျခဲ့ကွပါတယျ။ အရပျသားနဲ့ တရုတျစဈသုံ့ပနျးမြား ၁၃၀၀ ကိုတော့ Tai Ping ဂိတျဝမှာ သတျဖွတျခဲ့ပါတယျ။ မွမွှေုပျမိုငျး ထောငျထားတဲ့ မိုငျးကှငျးကို ဖွတျသနျးစကော သတျဖွတျခဲ့တာလညျး ရှိပါတယျ။ အမြားစုက သကေုနျကွပွီး အသကျရှငျကနျြရဈသူမြားကို လှံစှပျဖွငျ့ ထပျမံထိုးသတျခဲ့ပါတယျ။ စဈသုံ့ပနျးမြားကို လှံစှပျဖွငျ့ ထိုးသတျစဉျ ဂပြနျစဈသီခငျြးမြား ဖှငျ့ထားကွပါတယျ။ ထိုစဉျက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ဂပြနျ စဈသီခငျြးထဲက တခြိူ့ကို အသုံးပွုခှငျ့ ပိတျထားပါတယျ။ ဂပြနျအရာရှိ တခြိူ့ကတော့ စဈသုံ့ပနျးမြားနဲ့ ဓားရေးယှဉျကွပွီး နိုငျရငျ လှတျပေးလို့ ဆိုကွပမေယျ့ ဓားရေးကောငျးတဲ့ အရာရှိတှကေိုတော့ နိုငျတဲ့လူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နနျကငျြးမွို့တိုကျပှဲပွီးနောကျ ဖမျးဆီးခံရတဲ့ တရုတျစဈသုံ့ပနျး ၅၇၅၀၀ ကြျောလောကျဟာ သတျဖွတျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
နယူးယောကျတိုငျး The New York Times သတငျးထောကျ F. Tillman Durdin ဟာ သူအဖမျးမခံရစဉျ နနျကငျြးမွို့အခွအေနကေို The New York Times သတငျးစာတိုကျကို အခုလို ပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။
"ကြှနျတျော ရုတျတရတျ စကျသနေတျ ဝလေို့ကျတဲ့ အသံကို ကွားလိုကျတယျဗြ။ ဂပြနျစဈသားတှဟော ၁၀ မိနဈလောကျ ပဈခတျနတေယျ။ ခနကွာတော့ ကြှနျတျောရောကျတဲ့အခြိနျမှာ မိနျးမနဲ့ ကလေးငယျ အပါအဝငျ လူ ၂၀၀ လောကျ အသကျမဲ့နကွေပွီ။ Tai Ping ဂိတျမှာလညျး လူ ၆ ယောကျကို ဆှဲကွိုးခပြွီး သတျခဲ့သေးတယျ။ ဒီတိုငျး တနျးလနျးကွီး ထားခဲ့ကွတယျ။ တခါတလေ တငျ့ဖကျြအမွောကျတှနေဲ့ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ ပဈသတျတာတှေ ရှိသေးတယျ။"
"ဂပြနျစဈသားတှကေ တရုတျစဈသုံ့ပနျးတှကေို အရသာခံပွီး သတျကွတယျ။ တခြိူ့ ရကျစကျတဲ့ ဂပြနျစဈသားတှဟော စဈသုံ့ပနျးတှကေို သတျပွီး အသညျးနဲ့ နှလုံးကို ထုတျယူပွီး မီးကငျစားကွတယျ။"
သိပျမကွာခငျမှာတော့ Durdin တို့ နိုငျငံခွားသားတှကေို နနျကငျြးစဈမဲ့ဇုနျအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ နရောကို ပို့ဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါနရောဟာ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ဖှငျ့လှဈထားပမေယျ့ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ လူသတျမှု မုဒိနျးမှု လုယကျမှုတှဟော အဆိုပါ စဈမဲ့ဇုနျထဲမှာ ဖွဈခဲ့တာမြားပါတယျ။ ဂပြနျတှဟော နိုငျငံတကာ စညျးမဉျြး စညျးကမျးတှကေို လိုကျနာခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။
၁၉၃၈ ဖဖေျောဝါရီ ၅ ရကျနမှေ့ာတော့ ဂပြနျစဈသံရုံးကို နိုငျငံပေါငျးခြူ ပျအသငျးကွီးက ချေါယူခဲ့ပွီး နနျကငျြးမွို့မှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အမှုတှဲပေါငျး ၄၅၀ ခနျ့ ပါဝငျတဲ့ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ရာဇဝတျမှုမြားဆိုငျရာ အစီရငျခံစာကို ခပြွခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ ဂြာမနီ ဗွိတိနျ အမရေိကနျ သံရုံးတှဟော သူတို့ရဲ့ သံတမနျမြားကို ပွနျလညျချေါယူခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇငျဘာ ၁၄ ရကျနေ့ ညမှာတော့ ဂပြနျစဈသားမြား အိမျတှကေို ဝငျရောကျစီးနငျးကွပွီး အမြိူးသမီးမြား ချေါယူသှားခွငျး သို့မဟုတျ ထိုနရောမှာပငျ အဓမ်မပွုကငျြ့ခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ အဆိုပါ ထိတျလနျ့ဖှယျ ဖွဈရပျမြားကွောငျ့ အမြိူးသမီးငယျ တခြိူ့ဟာ GinLing ကောလိပျပရဝုဏျထဲသို့ ပွေးဝငျခိုလှုံခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီဇငျဘာ ၁၅ ရကျနေ့ ညအခြိနျမှာတော့ ဂပြနျစဈသားတှဟော နနျကငျြးတက်ကသိုလျဝနျးထဲ ဝငျရောကျလာပွီး နနျကငျြးတက်ကသိုလျ Tao Yuan အဆောကျအအုံထဲမှာ အမြိူးသမီး ၃၀ ကို အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့ကွပွီး တခြိူ့ကတော့ ၆ ယောကျခနျ့ ပွုကငျြ့တာကို ခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီဇငျဘာ ၁၈ ရကျနေ့ နလေ့ယျ ၄ နာရီခနျ့ အခြိနျ အမှတျ ၁၀၁ Ho Lu အိမျနားမှာ ဂပြနျစဈသား တဈယောကျဟာ တရုတျအမြိူးသားထံကနေ ဆေးလိပျတောငျးရာ တရုတျအမြိူးသား ဆေးလိပျ ထုတျပေးတာ ကွာတယျဟုဆိုပွီး ဦးခေါငျးကို လှံစှပျဖွငျ့ ထိုးခဲ့ပါတယျ။ အခု သူ့ကို ဆေးရုံတငျထားပမေယျ့ အသကျရှငျဖို့တော့ မသခြောပါဘူး။
ဒီဇငျဘာ ၁၆ ရကျနမှေ့ာပဲ မိနျးကလေး ၇ ဦး (အသကျ ၁၆ နှဈကနေ ၂၁ နှဈကွား) ဂပြနျစဈတပျဝနျးထဲကို ဖမျးဆီးချေါဆောငျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၁၈ ရကျနမှေ့ာတော့ ၅ ဦး ပွနျလှတျလာခဲ့ပါတယျ။ သူတို့အားလုံးဟာ ၇ ကွိမျ ၈ ကွိမျခနျ့ အဓမ်မပွုကငျြ့တာ ခံခဲ့ရပါတယျ။
83 လမျးနဲ့ 85 လမျးမှာ ပိတျမိနတေဲ့ ဒုက်ခသညျ ၅၄၀ ခနျ့ ရှိပွီး အမြိူးသမီးနဲ့ မိနျးကလေး ၃၀ ခနျ့ဟာ မုဒိနျးကငျြ့ခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။ သူတို့ဟာ ညတိုငျး ကွောကျလနျ့မှုတှကွေားမှာ ငိုယိုရုံကလှဲလို့ ဘာမှမတတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အခွအေနကေ ကြှနျတျောတို့ ထငျထားတာထကျ ဆိုးရှားနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အမွနျဆုံး အကူညီပေးသငျ့ပါတယျ။
လြှိူလို့ချေါတဲ့ မိနျးကလေးတယောကျဟာ ဒုက်ခသညျစခနျးရှမှေ့ာ ဂပြနျစဈသားက ခေါငျးကို သနေတျနဲ့ ပဈသတျခဲ့ပါတယျ။ ကောငျမလေးရဲ့ အသကျဟာ ၁၄ နှဈသာ ရှိပါသေးတယျ။
Rabe ရဲ့ မှတျတမျးမှာတော့ ကယျဆယျရမယျ့ တရုတျ ဒုက်ခသညျစာရငျးဟာ ၂ သိနျးကနေ ၂ သိနျးခှဲထိ ရှိနတေယျလို့ အစီရငျခံခဲ့ပါတယျ။ Rabe ဟာ Siemens AG Chinese Corporation က Nanking Safety Zone စဈအတှငျးက ဘေးကငျးမှုဇုနျကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဂြာမနျလူမြိူး John Rabe ဖွဈပါတယျ။
ထို့သို့ စီရငျခံစားမြားကွောငျ့ နိုငျငံတကာက ရှုံခခြဲ့ကွပွီးနောကျ ၁၉၃၈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ ဂပြနျစဈတပျဟာ နနျကငျြးဒုက်ခသညျစခနျးမြားမှ ပွညျသူမြားကို အိမျပွနျသှားဖို့ အငျအားသုံးပွီး လုပျဆောငျခဲ့ကာ မွို့ပွနျလညျတညျဆောကျရေး အတှကျ အမိနျ့စာကို ကွျောညာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျမှာတော့ ဂပြနျစဈတပျရဲ့ ရကျစကျမှုမြား နညျးပါးသှားခဲ့ပွီး နိုငျငံပေါငျးခြူ ပျအသငျးကွီးမှ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးမြားကိုလညျး ပိုမို လုပျဆောငျလာနိုငျပါတယျ။
စဈပွီးနောကျ နနျးကငျြးစဈရာဇဝတျမှုအတှကျ စီရငျခကျြမြား
စဈကွီးပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မငျးသား အာဆာကာကို တျောဝငျသှေးအဖွဈကနေ သာမနျအရပျသားအဖွဈ ပွဈဒဏျပေးခဲ့ပါတယျ။ တခွား အဆငျ့မွငျ့အရာရှိ ၅ ဦးလောကျကို ကွိုးပေးပွဈဒဏျအဖွဈ သဒေဏျပေးခဲ့ပါတယျ။
စဈကွီးပွီးနောကျ ဂပြနျတို့၏ ဝနျခတြောငျးပနျမှုမြား
၁၉၉၅ သွဂတျလ ၁၅ ရကျနေ့ ဂပြနျတို့ လကျနကျခတြာ ၅၅ နှဈပွညျ့မှာတော့ ဂပြနျဝနျကွီးခြူ ပျ တိုမီအီခြီ မူယာရာမ ပထမဆုံး အကွိမျအဖွဈ ရှငျးလငျးစှာ ဝနျခတြောငျးပနျခွငျးကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ စဈအတှငျး အာရှနိုငျငံမြားမှာ ဂပြနျတို့ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ပွဈမှုမြားအတှကျ မြားစှာဝမျးနညျးရပါကွောငျးကို ဝနျခတြောငျးပနျမှု ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျဘုရငျကလညျး ဂပြနျ စဈတပျရဲ့ စဈရာဇဝတျမှုမြားကွောငျ့ သဆေုံးသှားခဲ့ရတဲ့ လူအမြားအတှကျ ဝမျးနညျးကွောငျးနှငျ့ ဝနျခတြောငျးပနျမှုကို တရားဝငျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တရုတျကတော့ ဒါဟာ လုံလောကျတဲ့ ဝနျခတြောငျးပနျမှု မဟုတျဘူး။ ဂပြနျတှဟော တရုတျနိုငျငံနဲ့ နနျကငျြးပွညျသူတှကေို သီးသနျ့ ဝနျခတြောငျးပနျတာတှေ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုးရီးယားမှာ လိငျကြှနျအဖွဈ ဖြျောဖွပေေးခဲ့တဲ့ အမြိူးသမီးမြားဟာ ယနခြေိ့နျထိ ဂပြနျအစိုးရဟာ သူတို့လို လိငျကြှနျအဖွဈ အဓမ်မ စခေိုငျးခံရတဲ့ လူတှအေတှကျ သီးသနျ့ ဝနျခတြောငျးပနျတာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ယနတေို့ငျ နနျကငျြးမွို့ရဲ့ တခြိူ့နရောတှမှော တူးဖျောပါက အရိုးစုမြားစှာကို မွငျတှနေ့ရေဆဲလို့ ပွောကွပါတယျ။ နနျကငျြးအကွမျးဖကျခံရမှု အောကျမဖှေ့ယျပွတိုကျမှာတော့ တူးဖျောရရှိခဲ့တဲ့ ကငျြးမြားထဲမှ အရိုးစုမြားနဲ့ တခွားအောကျမဖှေ့ယျ ပစ်စညျးမြားကို ပွသထားတာ တှရေ့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယခု နနျးကငျြးအကွမျးဖကျခံရမှုကို ရေးရခွငျး အကွောငျးအရငျးဟာ စဈရဲ့ ဆိုးရှားလှပုံ စဈပှဲရဲ့ အကြိူးဆကျမြား ပွညျသူတှရေဲ့ ဒုက်ခရောကျပုံ စဈရာဇဝတျမှုဆိုတာ မကြူးလှနျသငျ့ကွောငျး စတာတှကေို အသိပညာပေးစလေိုသော စိတျဖွငျ့သာ ရေးသားခွငျး ဖွဈပါသညျ။ မှားယှငျးမှု ရှိပါက ကြှနျတျောတို့ မှတျစုကွမျးမှ တောငျးပနျအပျပါသညျ။
ပုံတှကေို တပုံခငျြးစီ ထောကျကွညျ့ပေးပါ။ စာမဆနျ့လို့ ပုံနှငျ့စာ တှဲရေးထားပါတယျ။
“ 孔雀明王 ခုံချွင့် မြိန်းဝမ် ” အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ။
10:07 PM C-Knowledge , Chinese
ခုံချွင့် မြိန်းဝမ် မဟာမာရူရိ
Mahamayuri နတ်ဘုရား အကြောင်း
ဟိန္ဒူ ရိုးရာ ဘဂဝါဂီ တတွင်
ဗြဟ္မမင်း၏ ဦးခေါင်းတော်ခေါင်းပေါင်း ၌
ရှိသော ဥဒေါင်းတောင်ကို အစွဲပြု၍
ဥဒေါင်း နတ်ဘုရား မွေးဖွား လာသည်
လောက စည်းမျဉ်း ဥပဒေကို စောင့်ရှောက်တော်မူပြီး
ဖယ်ရှားပေး၍ ရောဂါတို့ကို ဖယ်ရှားကာ
ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိ၏ဟု ဆိုထားသည်
ထိုအချက် ကို တိဗက် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းတချို့ တွင် ရောထွေး ၍
နတ်ဘုရား ဒေါင်းမင်း သည်
ဂဠုန် မင်း နတ်မိစ္ဆာနှင့် အပေါင်း အဖော်
ဖြစ်ကာ ဘုရားအလောင်းတော်ကို မြို ချ ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည် ဘုရားအလောင်းတော်သည်
တရားပြသောကြောင့် ဒေါင်းမင်း နောင်တရ၍ ဘုရား အလောင်းတော်ကို
အန် ထုတ် သည် ထိုနောက် တွင် တရားရ၍佛母大金曜孔雀明王
ဟိန္ဒူဘာသာက ယူဆ သကဲ့သို့
အဆိပ် တို့ ကို ဖယ်ရှားနိုင်သူ
မကောင်းဆိုးဝါး ဝိဥာဉ် အား စားသောက်
ဖယ်ရှားပေးသူ ဟူသော သဘောဖြင့်
ဖူဆ ဗောဓိသတ် လို ကော
နတ်ဘုရား အသွင်ပါ ကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည် တိဗက်မှော်ပညာ ကဏ္ဍတွင်
ပယောဂ နှိမ်နှင်း ပေးသည့်
နတ်ဘုရား တစ်ပါး အသွင်
ကိုးကွယ် ခဲ့ကြ သည်
ဘုရား မိခင် 明王 အလင်းဆောင်ကိုယ်တော် ငါးပါးစာရင်းတွင်
孔雀明王ဥဒေါင်း အလင်းဆောင်ကိုယ်တော် အဖြစ် ပါဝင်သည်
ဥုံ မာယူရ ကူရန်တယ် ဆွားဟ
OM. mayura kramte svaha
ဟူသော ဂါထာ တော် ကို မပြတ်ရွတ် ဆို
ပေးခြင်းဖြင့် အဆိပ် မှန်သမျှ ကို နိုင်နင်းခြင်း မြွေ မှန်သမျှ အန္တရာယ်မပြု နိုင်ခြင်း စိတ် ၏ အညစ် အကြေးကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း
မကောင်း ဆိုးဝါး ဝိဥာဉ် ကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း
ကံဆိုးမှုကို ဖယ် ရှားနိုင် ခြင်း ရှိသည်ဟု
ထေရ ဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်
ဘဝ က အန္တရယ် မှ လွတ်အောင်
နေမင်း ကို နေ့စဉ် မနက်ည ရှိခိုး ခြင်း
ညာဏ်တော်ကို ရှိခိုးခြင်းဖြင့် ရန်သူ မုဆိုးတို့လက်မှ
လွတ် ခဲ့ကြောင်း ပါရှိသည်
ဒေါင်းမင်း ဖြစ်စဉ် ဘဝ သမိုင်း ကြောင်း
မှာ အတူတူ ပင် ဖြစ်သည်
ပစ္စုပ္ပန် သမိုင်း တွင်
ရဟန်းတပါး ခြေမ ကို အဆိပ်အလွန်ပြင်းသော
အနက်ရောင် မြွေ ကိုက်ခံရသည်ကို
အရှင်အာနန္ဒာ က ဘုရားကို လျှောက်ထားရာ အရှင် အာနန္ဒာကို
ဘုရား က ဥဒေါင်းမင်း ဂါထာ သင်ပေး
လိုက်သည် အရှင် အာနန္ဒာက
မြွေ ကိုက်ခံရသော ရဟန်း အတွက်
အဆိပ် များ လျောကျကင်းစင်၍
အသက် ချမ်းသာရ ရသည်
ဘုရား မြတ် က ဆက်လက်၍
大孔雀明王心咒 ကို ရွတ် ဆို ခြင်းဖြင့်
စိတ် အတွင်း အညစ်အကြေးများ ကင်းစင်ခြင်း
အစွဲပြု၍ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ အစဉ် အဆက် စကြမုနိဘုရား၏ ကိုယ်ပွား ဘုရားအဖြစ်孔雀明王ကို ကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည်
ထျန်းကုံး ၏ မိခင်တပါး အဖြစ်
တောက် ဝါဒ ဇာတ်လမ်းများမှာ
တိဗက်မဟာယာန ဇာတ်လမ်းတို့နှင့် ဆင်တူသည်
ဘုရား အစား ထျန်းကုံးပြောင်းသွား ခြင်းသာ ဖြစ်သည်
နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားအသွင် ကော မယ်တော်အသွင်ပါ
၂မျိုး လုံးကိုးကွယ် ကြသည်
Námó fú mǔ dà kǒngquè míngwáng púsà mó hē s ဟု ရှိခိုး ပူဇော်ကြသည်
Credit - HZMM 天下第一
孔雀明王 ခုံခြှငျ့ မွိနျးဝမျ
ခုံခြှငျ့ မွိနျးဝမျ မဟာမာရူရိ
Mahamayuri နတျဘုရား အကွောငျး
ဟိန်ဒူ ရိုးရာ ဘဂဝါဂီ တတှငျ
ဗွဟ်မမငျး၏ ဦးခေါငျးတျောခေါငျးပေါငျး ၌
ရှိသော ဥဒေါငျးတောငျကို အစှဲပွု၍
ဥဒေါငျး နတျဘုရား မှေးဖှား လာသညျ
လောက စညျးမဉျြး ဥပဒကေို စောငျ့ရှောကျတျောမူပွီး
ဖယျရှားပေး၍ ရောဂါတို့ကို ဖယျရှားကာ
ကကျြသရေ မင်ျဂလာရှိ၏ဟု ဆိုထားသညျ
ထိုအခကျြ ကို တိဗကျ မဟာယာန ဗုဒ်ဓဘာသာဂိုဏျးတခြို့ တှငျ ရောထှေး ၍
နတျဘုရား ဒေါငျးမငျး သညျ
ဂဠုနျ မငျး နတျမိစ်ဆာနှငျ့ အပေါငျး အဖျော
ဖွဈကာ ဘုရားအလောငျးတျောကို မွို ခြ ခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ ဘုရားအလောငျးတျောသညျ
တရားပွသောကွောငျ့ ဒေါငျးမငျး နောငျတရ၍ ဘုရား အလောငျးတျောကို
အနျ ထုတျ သညျ ထိုနောကျ တှငျ တရားရ၍佛母大金曜孔雀明王
ဟိန်ဒူဘာသာက ယူဆ သကဲ့သို့
အဆိပျ တို့ ကို ဖယျရှားနိုငျသူ
မကောငျးဆိုးဝါး ဝိဉာဉျ အား စားသောကျ
ဖယျရှားပေးသူ ဟူသော သဘောဖွငျ့
ဖူဆ ဗောဓိသတျ လို ကော
နတျဘုရား အသှငျပါ ကိုးကှယျ ခဲ့ကွသညျ တိဗကျမှျောပညာ ကဏ်ဍတှငျ
ပယောဂ နှိမျနှငျး ပေးသညျ့
နတျဘုရား တဈပါး အသှငျ
ကိုးကှယျ ခဲ့ကွ သညျ
ဘုရား မိခငျ 明王 အလငျးဆောငျကိုယျတျော ငါးပါးစာရငျးတှငျ
孔雀明王ဥဒေါငျး အလငျးဆောငျကိုယျတျော အဖွဈ ပါဝငျသညျ
ဥုံ မာယူရ ကူရနျတယျ ဆှားဟ
ဟူသော ဂါထာ တျော ကို မပွတျရှတျ ဆို
ပေးခွငျးဖွငျ့ အဆိပျ မှနျသမြှ ကို နိုငျနငျးခွငျး မွှေ မှနျသမြှ အန်တရာယျမပွု နိုငျခွငျး စိတျ ၏ အညဈ အကွေးကို ဖယျရှားနိုငျခွငျး
မကောငျး ဆိုးဝါး ဝိဉာဉျ ကို ဖယျရှားနိုငျခွငျး
ကံဆိုးမှုကို ဖယျ ရှားနိုငျ ခွငျး ရှိသညျဟု
ထရေ ဝါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာတှငျ
ဘဝ က အန်တရယျ မှ လှတျအောငျ
နမေငျး ကို နစေ့ဉျ မနကျည ရှိခိုး ခွငျး
ညာဏျတျောကို ရှိခိုးခွငျးဖွငျ့ ရနျသူ မုဆိုးတို့လကျမှ
လှတျ ခဲ့ကွောငျး ပါရှိသညျ
ဒေါငျးမငျး ဖွဈစဉျ ဘဝ သမိုငျး ကွောငျး
မှာ အတူတူ ပငျ ဖွဈသညျ
ပစ်စုပ်ပနျ သမိုငျး တှငျ
ရဟနျးတပါး ခွမေ ကို အဆိပျအလှနျပွငျးသော
အနကျရောငျ မွှေ ကိုကျခံရသညျကို
အရှငျအာနန်ဒာ က ဘုရားကို လြှောကျထားရာ အရှငျ အာနန်ဒာကို
ဘုရား က ဥဒေါငျးမငျး ဂါထာ သငျပေး
လိုကျသညျ အရှငျ အာနန်ဒာက
မွှေ ကိုကျခံရသော ရဟနျး အတှကျ
အဆိပျ မြား လြောကကြငျးစငျ၍
အသကျ ခမျြးသာရ ရသညျ
ဘုရား မွတျ က ဆကျလကျ၍
大孔雀明王心咒 ကို ရှတျ ဆို ခွငျးဖွငျ့
စိတျ အတှငျး အညဈအကွေးမြား ကငျးစငျခွငျး
အစှဲပွု၍ မဟာယာန ဗုဒ်ဓဘာသာ အစဉျ အဆကျ စကွမုနိဘုရား၏ ကိုယျပှား ဘုရားအဖွဈ孔雀明王ကို ကိုးကှယျ ခဲ့ကွသညျ
ထနျြးကုံး ၏ မိခငျတပါး အဖွဈ
တောကျ ဝါဒ ဇာတျလမျးမြားမှာ
တိဗကျမဟာယာန ဇာတျလမျးတို့နှငျ့ ဆငျတူသညျ
ဘုရား အစား ထနျြးကုံးပွောငျးသှား ခွငျးသာ ဖွဈသညျ
နောကျပိုငျးတှငျ အမြိုးသားအသှငျ ကော မယျတျောအသှငျပါ
၂မြိုး လုံးကိုးကှယျ ကွသညျ
Námó fú mǔ dà kǒngquè míngwáng púsà mó hē s ဟု ရှိခိုး ပူဇျောကွသညျ
9:48 PM C-Knowledge , Chinese
ခိန့်​ဟုတ်​ဘုရား​ကျောင်း​တော်​တွင်​ ဝင်​​ပေါက်​၃​ပေါက်​အနက်​ စဉ့်​အိုးတန်းလမ်းဘက်​မှတံခါး​ပေါက်​သည်​ နဂါး အဝင်​​ပေါက်​ဖြစ်​သည်​။ ၁၈လမ်းဘက်​မှတံခါး​ပေါက်​သည်​ ကျားအထွက်​​ပေါက်​ဖြစ်​သည်​။ ဘုရား​ကျောင်း​တော်​သို့လာမည်​ဆိုပါက နဂါးဘက်​မှဝင်​ရပါမည်​။ အလယ်​အဝင်​​ပေါက်​နှင့်​ ကျားအထွက်​​ပေါက်​မှမဝင်​ရပါ။ အလယ်​ဝင်​​ပေါက်​က ဝင်​မည်​ဆိုပါက ကွမ်​ရင်​ဖူဆအား ​ကျောင်းအပြင်​မှ သုံးကြိမ်​ဦးတိုက်​ကန်​​တော့ပြီးမှဝင်​ပါ။ ရုပ်​ပွား​တော်​များအား ရင်​​ငွေ့​တော်​လှုံရန်​ပင့်​​ဆောင်​လာပါက အလယ်​အဝင်​​ပေါက်​မှဝင်​​ရောက်​ရမည်​။
Credit - 仰光 慶福宮
၁။ ဦးစွာ ​အ​မွှေးတိုင်​အကြီး၃တိုင်​နှင့်​ နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ကို အဓိကအ​မွှေးတိုင်​အိုးတွင်​ ထွန်းညှိ၍ ပူ​ဇော်​ကန်​​တော့ပါ။ အဓိကအ​မွှေးတိုင်​အိုးသည်​ ကွမ်​ရင်​ဖူဆအ​ရှေ့စားပွဲ၌ အ​မွှေးတိုင်​၃အိုးရှိသည့်​အနက်​ အလယ်​အိုးဖြစ်​သည်​။ ဖ​ယောင်းတိုင်​အနီ နှစ်​တိုင်​ဖြင့်​ ဖူဆအားကန်​​တော့ပါ။ ကန်​​တော့ဖွယ်​ ပစ္စည်းများနှင့်​ ​ရွှေစက္ကူများအား ဆက်​ကပ်​ပါ။ သက်​သတ်​လွတ်​ကန်​​တော့ပစ္စည်းများဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၂။ မိုးနတ်​မင်းအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ကန်​​တော့ဖွယ်​အစုံဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၃။ မား​ကျော့မယ်​​တော်​အား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ဖြင့်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ပင်​လယ်​ရပ်​ခြားခရီးသွားသူများနှင့်​ ကျန်းမာ​ရေး စီးပွား​ရေးအတွက်​ ဆု​တောင်းပါ။ ကန်​​တော့ဖွယ်​ အစုံဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၄။ ​ပေါင်​စန်းတတိနှင့်​ ရှုံ​တေ့ကုန်းနတ်​မင်းအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ကျန်းမာ​ရေးဆု​တောင်းနိုင်​သည်​။ ကန်​​တော့ဖွယ်​ အစုံဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၅။ ကွမ်​ကုန်းနတ်​မင်းကြီးအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ စီးပွား​ရေးဆု​တောင်း အဓိဋ္ဌာန်​ပြုနိုင်​သည်​။ အသား သစ်​သီး အရက်​ဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၆။ ​ဟော့ရာကုန်းကျားဘိုးဘိုးအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ကျန်းမာ​ရေး ဂြိုဟ်​စီးဂြိုလ်​နှင်း အတိုင်​အခိုက်​ အ​နှောက်​အယှက်​များဖယ်​ရှားနိုင်​ရန်​ ဆု​တောင်းကန်​​တော့ပါ။
​ခေါက်​ဆွဲ၊ ဘဲဥအစိမ်းနှစ်​လုံး၊ ဝက်​သားသုံးထပ်​သားအစိမ်းဖြင့်​ ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၇။ အိုက်​ဟိုက်​ကုန်းအား နံသာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး တစ်​​ချောင်း နှင့်​ ဖ​ယောင်းတိုင်​တစ်​​ချောင်းဖြင့်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ က​လေးသူငယ်​များအငိုတိတ်​​စေရန်​ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်း​စေရန်​ဆု​တောင်းပါ။ တရုတ်​မုန့်​ဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၈။ အိုက်​ချိုကုန်းအား နံ့သာဖြူ အ​မွှေးတိုင်​အ​သေးတစ်​​ချောင်း နှင့်​ ဖ​ယောင်းတိုင်​တစ်​​ချောင်းဖြင့်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ က​လေးသူငယ်​များ ပြုံး​ပျော်​​စေရန်​ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်း​စေရန်​ဆု​တောင်းပါ။ တရုတ်​မုန့်​ဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၉။ ထူတိကုန်း​မြေ​စောင့်​ဘိုးဘိုးအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ စီးပွား​ရေး နှင့်​ ​မြေဝယ်​ကိစ္စများအတွက်​ ဆု​တောင်းကန်​​တော့ပါ။ အဓိဋ္ဌာန်​ပြုပါ။ အသားကင်​၊ သစ်​သီး များဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၁၀။ ဘွန်​​ချောင်​ကုန်းအား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ဖြင့်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ပညာ​ရေးအတွက်​ ဆု​တောင်းပါ။ မ​ရွေး၊ ပဲပြား၊ ကြက်​သွန်​မြိတ်​၊ တရုတ်​နံနံ၊ သိကြားလုံး၁၂လုံး နှင့်​ ကန်​​တော့ဖွယ်​များဖြင့်​ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။ မှတ်​ချက်​ ဥမပါရ။
၁၁။ ကြူ့စိန်​မယ်​​တော်​အား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ဖြင့်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ က​လေးဆုပန်​နိုင်​သည်​။
နှင်းဆီပန်းအနီ၇ပွင့်​ သို့ ဂန္ဓမာအဖြူ၇ပွင့်​၊ က​လေး​ပေါင်​ဒါနှစ်​ပူး၊ ကြက်​ဥမ​ရွေး ၊ သိကြားလုံး၊ တရုတ်​မုန့်​၊ သစ်​သီးများဖြင့်​ ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
၁၂။ မြတ်​စွာဘုရားနှင့်​ အန်းကုန်းဘိုး​တော်​အား နံ့သာဖြူအ​မွှေးတိုင်​အ​သေး ၃တိုင်​ နှင့်​ ဖ​ယောင်းအနီးနှစ်​တိုင်​ ထွန်းညှိကန်​​တော့ပါ။ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ခဲဖွယ်​များဖြင့်​ ကန်​​တော့နိုင်​သည်​။
အ​မွှေးတိုင်​အကြီး တစ်​စုံ ၃​ချောင်း
အ​မွှေးတိုင်​တစ်​ဝက်​​ကျော်​ထွန်းညှိပြီးမှ ​ရွှေစက္ကူအား မီးရှို့ကန်​​တော့ပါ။
ရှိခိုးကန်​​တော့ပြီးပါက ၁၈လမ်းဘက်​ ကျန်းမာ​ရေးဘိုး​တော်​အ​ရှေ့ကျားအထွက်​​ပေါက်​မှ ထွက်​ပါ။
မှတ်​ချက်​။ သြဇာသီး၊ ခရမ်းသီး၊ မလာကာသီး မကပ်​ရပါ။
ကွမ်​ရင်​ဖူဆ အား သက်​သတ်​လွတ်​ကန်​​တော့ပါ။
ခိနျ့ဟုတျဘုရားကြောငျးတျောတှငျ ဝငျပေါကျ၃ပေါကျအနကျ စဥျ့အိုးတနျးလမျးဘကျမှတံခါးပေါကျသညျ နဂါး အဝငျပေါကျဖွဈသညျ။ ၁၈လမျးဘကျမှတံခါးပေါကျသညျ ကြားအထှကျပေါကျဖွဈသညျ။ ဘုရားကြောငျးတျောသို့လာမညျဆိုပါက နဂါးဘကျမှဝငျရပါမညျ။ အလယျအဝငျပေါကျနှငျ့ ကြားအထှကျပေါကျမှမဝငျရပါ။ အလယျဝငျပေါကျက ဝငျမညျဆိုပါက ကှမျရငျဖူဆအား ကြောငျးအပွငျမှ သုံးကွိမျဦးတိုကျကနျတော့ပွီးမှဝငျပါ။ ရုပျပှားတျောမြားအား ရငျငှတေ့ျောလှုံရနျပငျ့ဆောငျလာပါက အလယျအဝငျပေါကျမှဝငျရောကျရမညျ။
၁။ ဦးစှာ အမှေးတိုငျအကွီး၃တိုငျနှငျ့ နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျကို အဓိကအမှေးတိုငျအိုးတှငျ ထှနျးညှိ၍ ပူဇျောကနျတော့ပါ။ အဓိကအမှေးတိုငျအိုးသညျ ကှမျရငျဖူဆအရှစေ့ားပှဲ၌ အမှေးတိုငျ၃အိုးရှိသညျ့အနကျ အလယျအိုးဖွဈသညျ။ ဖယောငျးတိုငျအနီ နှဈတိုငျဖွငျ့ ဖူဆအားကနျတော့ပါ။ ကနျတော့ဖှယျ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ ရှစေက်ကူမြားအား ဆကျကပျပါ။ သကျသတျလှတျကနျတော့ပစ်စညျးမြားဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၂။ မိုးနတျမငျးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကနျတော့ဖှယျအစုံဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၃။ မားကြော့မယျတျောအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျဖွငျ့ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ပငျလယျရပျခွားခရီးသှားသူမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေး စီးပှားရေးအတှကျ ဆုတောငျးပါ။ ကနျတော့ဖှယျ အစုံဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၄။ ပေါငျစနျးတတိနှငျ့ ရှုံတကေု့နျးနတျမငျးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကနျြးမာရေးဆုတောငျးနိုငျသညျ။ ကနျတော့ဖှယျ အစုံဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၅။ ကှမျကုနျးနတျမငျးကွီးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ စီးပှားရေးဆုတောငျး အဓိဋ်ဌာနျပွုနိုငျသညျ။ အသား သဈသီး အရကျဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၆။ ဟော့ရာကုနျးကြားဘိုးဘိုးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကနျြးမာရေး ဂွိုဟျစီးဂွိုလျနှငျး အတိုငျအခိုကျ အနှောကျအယှကျမြားဖယျရှားနိုငျရနျ ဆုတောငျးကနျတော့ပါ။
ခေါကျဆှဲ၊ ဘဲဥအစိမျးနှဈလုံး၊ ဝကျသားသုံးထပျသားအစိမျးဖွငျ့ ကနျတော့နိုငျသညျ။
၇။ အိုကျဟိုကျကုနျးအား နံသာဖွူအမှေးတိုငျအသေး တဈခြောငျး နှငျ့ ဖယောငျးတိုငျတဈခြောငျးဖွငျ့ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကလေးသူငယျမြားအငိုတိတျစရေနျ ကနျြးမာရေးကောငျးစရေနျဆုတောငျးပါ။ တရုတျမုနျ့ဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၈။ အိုကျခြိုကုနျးအား နံ့သာဖွူ အမှေးတိုငျအသေးတဈခြောငျး နှငျ့ ဖယောငျးတိုငျတဈခြောငျးဖွငျ့ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကလေးသူငယျမြား ပွုံးပြျောစရေနျ ကနျြးမာရေးကောငျးစရေနျဆုတောငျးပါ။ တရုတျမုနျ့ဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၉။ ထူတိကုနျးမွစေောငျ့ဘိုးဘိုးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ စီးပှားရေး နှငျ့ မွဝေယျကိစ်စမြားအတှကျ ဆုတောငျးကနျတော့ပါ။ အဓိဋ်ဌာနျပွုပါ။ အသားကငျ၊ သဈသီး မြားဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။
၁၀။ ဘှနျခြောငျကုနျးအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျဖွငျ့ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ပညာရေးအတှကျ ဆုတောငျးပါ။ မရှေး၊ ပဲပွား၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ တရုတျနံနံ၊ သိကွားလုံး၁၂လုံး နှငျ့ ကနျတော့ဖှယျမြားဖွငျ့ကနျတော့နိုငျသညျ။ မှတျခကျြ ဥမပါရ။
၁၁။ ကွူ့စိနျမယျတျောအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျဖွငျ့ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ကလေးဆုပနျနိုငျသညျ။
နှငျးဆီပနျးအနီ၇ပှငျ့ သို့ ဂန်ဓမာအဖွူ၇ပှငျ့၊ ကလေးပေါငျဒါနှဈပူး၊ ကွကျဥမရှေး ၊ သိကွားလုံး၊ တရုတျမုနျ့၊ သဈသီးမြားဖွငျ့ ကနျတော့နိုငျသညျ။
၁၂။ မွတျစှာဘုရားနှငျ့ အနျးကုနျးဘိုးတျောအား နံ့သာဖွူအမှေးတိုငျအသေး ၃တိုငျ နှငျ့ ဖယောငျးအနီးနှဈတိုငျ ထှနျးညှိကနျတော့ပါ။ ဆှမျး၊ ပနျး၊ ခဲဖှယျမြားဖွငျ့ ကနျတော့နိုငျသညျ။
အမှေးတိုငျအကွီး တဈစုံ ၃ခြောငျး
အမှေးတိုငျတဈဝကျကြျောထှနျးညှိပွီးမှ ရှစေက်ကူအား မီးရှို့ကနျတော့ပါ။
ရှိခိုးကနျတော့ပွီးပါက ၁၈လမျးဘကျ ကနျြးမာရေးဘိုးတျောအရှကြေ့ားအထှကျပေါကျမှ ထှကျပါ။
မှတျခကျြ။ သွဇာသီး၊ ခရမျးသီး၊ မလာကာသီး မကပျရပါ။
ကှမျရငျဖူဆ အား သကျသတျလှတျကနျတော့ပါ။
တရုတ်​ရိုးရာ ပူ​ဇော်​ပွဲအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ။
8:55 PM C-Knowledge , Chinese
၂၇၊၁၊၂၀၁၇ ရက်​​​နေ့ည ၁၁း၀၀ နာရီမှအစပြုကာ ကြက်​ဇာတိပုံရပ် စိုးမိုး​သော နှစ်​သစ်​သို့ကူး​ပြောင်း​ရောက်​ရှိပါမည်​။​
၂၇၊၁၊၂၀၁၇ ရက်​​နေ့သည် ​မျောက်​ဇာတိပုံရိပ်​ စိုးမိုး​သော နှစ်​၏ ​နောက်​ဆုံး​နေ့ဖြစ်​ကာ ထို​နေ့၌ ChuXi ချူရှီး ပူ​ဇော်​ပွဲကိုကျင်းပကြသည်​။
ChuXi ပွဲ​နေ့ဟူသည်​ နှစ်​တစ်​နှစ်​၏ ​နောက်​ဆုံး​နေ့တွင်​ မိမိတို့ကိုးကွယ်​​သောနတ်​​ဒေဝတာများနှင့်​တကွ ကွယ်​လွန်​​လေပြီး​သော မိဘ၊ဘိုးဘွား၊​ဆွေမျိုးသားချင်း နှင့်​​သွေး​သောက်​ညီအကိုများကို ဂါရဝပြုပူ​ဇော်​ကြ​သော​နေ့ဖြစ်​သည်​။
တရုတ်​​လေ့တွင်​ ၁၂ လရာသီ ပွဲ​တော်​ ၂၄ ခုရှိရာ နှစ်​သစ်​ကူးပွဲ​တော်​၌ ChuXi ပူ​ဇော်​ပွဲ နှင့်​ ခုနစ်​လခွဲ ၌ ZhongYuan ပူ​ဇော်​ပွဲ (​ကောက်​ညှင်းထုပ်​ကန်​​တော့ပွဲဟုလည်း​ခေါ်ကြ။)တို့ကိုမူ အများစုက မပျက်​မကွက်​ ပူ​ဇော်​​လေ့ရှိကြသည်​။
အချို့မှာ ပွဲ​တော်​​နေ့မဟုတ်​​သော်​ငြားလည်းအ​ကြောင်းကိစ္စ​ပေါ်​ပေါက်​​သောအခါ မိမိတို့ကိုးကွယ်​​သော နတ်​​ဒေဝတာများအား အ​မွှေးတိုင်​၊ဖ​ယောင်းဆီမီးများ ပူ​ဇော်​ကာ ​အောင်​မြင်​အဆင်​​ပြေ​စေရန်​ ကိုးစား​တောင်းပန်​တတ်​ကြသည်​။​အောင်​မြင်​ပါက
က။ သည်​ သာမာန်​ကိစ္စများအတွက်​ အတွက်​ဖြစ်​သည်​။ဥပမာ (ခုတ​လော ​ငွေ​ကြေးအခက်​အခဲရှိ​နေပါသဖြင့်​ ​ပြေလည်​​စေရန်​ ကူညီ​ပေးပါ)
၃-ကြက်​သား (အချို့ကပိုမိုပြည့်​စုံ​စေရန်​ဘဲသားကိုပါ ထည့်​သွင်းပူ​ဇော်​ကြသည်​။)
တို့ပါဝင်​သည်​။(ပူ​ဇော်​ပွဲတိုင်းတွင်​ မုန့်​၊သစ်​သီိးများသာပါဝင်​ပါက လဘက်​ရည်​ကြမ်း သုံးခွက် ။ အသားပါဝင်​ပါက ယမကာ သုံးခွက်​ ထည်​သွင်းပု​ဇော်​ရသည်​။)
ခ။ သည်​ အ​ရေးကြီး​သောကိစ္စအတွက်​ဖြစ်​သည်​။ဥပမာ (ရပ်​​ဝေးတိုင်းခြားသို့သွား​ရောက်​ခြင်း၊ အနာ​ရောဂါ အသည်းအသန်​ခံစားရခြင်း)
၂-ဝက်​​ခေါင်း(ဤတွင်​ ၃-အသား၊၄-နှလုံး တို့ပါဝင်​ပြီးဖြစ်​သည်​ဟုယူရသည်​။ အချို့မှာ တိတိကျကျဖြစ်​​စေရန်​ အသားနှင့်​နှလုံးကိုသီးခြားထပ်​မံထည့်သွင်းပူ​ဇော်​ကြသည်​။
@ အမိ သို့မဟုတ်​အဘ ကွယ်​လွန်​​သောအခါတွင်​လည်း ` တီ​ထောင်း​ဂေါရှင်း´ဖြင့်​ကန်​​တော့ကြ​လေသည်​။
​* နေအိမ်​၊မိသားစု ဟူသည်​တရုတ်​​ရေးထုံးအားဖြင့်​ “အမိုး” ​အောက်​က“ဝက်​” 家 ဖြစ်​သည်​။ ထို့​ကြောင့်​ မိသားစု​ရေးရာ ကိစ္စများအတွက်​ ဝက်​သားကိုအဓိကထားကြခြင်းဖြစ်​သည်​။အ​ခြေ​လေး​ချောက်းတိရစ္ဆာန်​များ၏ ကိုယ်​စားဖြစ်​ကာ ​နေအိမ်​၊မိသားစုစည်းလုံးမှု နှင့်​စည်းစိမ်​ဥစ္စာများတည်​တန့်​ခိုင်​မြဲ​ရေးကို​ဖေါ်​ဆောင်​သည်​။
* ကြက်​၊ဘဲ မှာ ​ခြေနှစ်​ချောင်းတိရစ္ဆာန်​များ ကိုယ်​စားဖြစ်​ကာ စီးပွား​ရေး၊ဆက်​သွယ်​သွားလာ​ရေး၊အနာဂတ်​​​အောင်​မြင်​ရေးတို့ လွယ်​ကူလျှင်​မြန်​​စေရန်​ ရည်​ညွှန်းသည်​။
* ​ခေါက်​ဆွဲမှာကျန်းမာသက်​ရှည်​ခြင်းကို ​ဖေါ်ညွှန်း​လေသည်​။(ထို့​ကြောင့်​ ​ခေါက်​ဆွဲကို ပြုတ်​ရာ၌လည်း​ကောင်း၊​ကြော်​ရာ၌လည်း​ကောင်း ဖြတ်​​တောက်​ခြင်းမပြုကြ​ပေ။)​
Credit - Wu Jinzhi
၂၇၊၁၊၂၀၁၇ ရကျနညေ့ ၁၁း၀၀ နာရီမှအစပွုကာ ကွကျဇာတိပုံရပျ စိုးမိုးသော နှဈသဈသို့ကူးပွောငျးရောကျရှိပါမညျ။
၂၇၊၁၊၂၀၁၇ ရကျနသေ့ညျ မြောကျဇာတိပုံရိပျ စိုးမိုးသော နှဈ၏ နောကျဆုံးနဖွေ့ဈကာ ထိုနေ့၌ ChuXi ခြူရှီး ပူဇျောပှဲကိုကငျြးပကွသညျ။
ChuXi ပှဲနဟေူ့သညျ နှဈတဈနှဈ၏ နောကျဆုံးနတှေ့ငျ မိမိတို့ကိုးကှယျသောနတျဒဝေတာမြားနှငျ့တကှ ကှယျလှနျလပွေီးသော မိဘ၊ဘိုးဘှား၊ဆှမြေိုးသားခငျြး နှငျ့သှေးသောကျညီအကိုမြားကို ဂါရဝပွုပူဇျောကွသောနဖွေ့ဈသညျ။
တရုတျလတှေ့ငျ ၁၂ လရာသီ ပှဲတျော ၂၄ ခုရှိရာ နှဈသဈကူးပှဲတျော၌ ChuXi ပူဇျောပှဲ နှငျ့ ခုနဈလခှဲ ၌ ZhongYuan ပူဇျောပှဲ (ကောကျညှငျးထုပျကနျတော့ပှဲဟုလညျးချေါကွ။)တို့ကိုမူ အမြားစုက မပကျြမကှကျ ပူဇျောလရှေိ့ကွသညျ။
အခြို့မှာ ပှဲတျောနမေ့ဟုတျသျောငွားလညျးအကွောငျးကိစ်စပျေါပေါကျသောအခါ မိမိတို့ကိုးကှယျသော နတျဒဝေတာမြားအား အမှေးတိုငျ၊ဖယောငျးဆီမီးမြား ပူဇျောကာ အောငျမွငျအဆငျပွစေရေနျ ကိုးစားတောငျးပနျတတျကွသညျ။အောငျမွငျပါက
က။ သညျ သာမာနျကိစ်စမြားအတှကျ အတှကျဖွဈသညျ။ဥပမာ (ခုတလော ငှကွေေးအခကျအခဲရှိနပေါသဖွငျ့ ပွလေညျစရေနျ ကူညီပေးပါ)
၃-ကွကျသား (အခြို့ကပိုမိုပွညျ့စုံစရေနျဘဲသားကိုပါ ထညျ့သှငျးပူဇျောကွသညျ။)
တို့ပါဝငျသညျ။(ပူဇျောပှဲတိုငျးတှငျ မုနျ့၊သဈသီးမြားသာပါဝငျပါက လဘကျရညျကွမျး သုံးခှကျ ။ အသားပါဝငျပါက ယမကာ သုံးခှကျ ထညျသှငျးပုဇျောရသညျ။)
ခ။ သညျ အရေးကွီးသောကိစ်စအတှကျဖွဈသညျ။ဥပမာ (ရပျဝေးတိုငျးခွားသို့သှားရောကျခွငျး၊ အနာရောဂါ အသညျးအသနျခံစားရခွငျး)
၂-ဝကျခေါငျး(ဤတှငျ ၃-အသား၊၄-နှလုံး တို့ပါဝငျပွီးဖွဈသညျဟုယူရသညျ။ အခြို့မှာ တိတိကကြဖြွဈစရေနျ အသားနှငျ့နှလုံးကိုသီးခွားထပျမံထညျ့သှငျးပူဇျောကွသညျ။
@ အမိ သို့မဟုတျအဘ ကှယျလှနျသောအခါတှငျလညျး ` တီထောငျးဂေါရှငျး´ဖွငျ့ကနျတော့ကွလသေညျ။
* နအေိမျ၊မိသားစု ဟူသညျတရုတျရေးထုံးအားဖွငျ့ “အမိုး” အောကျက“ဝကျ” 家 ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မိသားစုရေးရာ ကိစ်စမြားအတှကျ ဝကျသားကိုအဓိကထားကွခွငျးဖွဈသညျ။အခွလေေးခြောကျးတိရစ်ဆာနျမြား၏ ကိုယျစားဖွဈကာ နအေိမျ၊မိသားစုစညျးလုံးမှု နှငျ့စညျးစိမျဥစ်စာမြားတညျတနျ့ခိုငျမွဲရေးကိုဖျေါဆောငျသညျ။
* ကွကျ၊ဘဲ မှာ ခွနှေဈခြောငျးတိရစ်ဆာနျမြား ကိုယျစားဖွဈကာ စီးပှားရေး၊ဆကျသှယျသှားလာရေး၊အနာဂတျအောငျမွငျရေးတို့ လှယျကူလြှငျမွနျစရေနျ ရညျညှနျးသညျ။
* ခေါကျဆှဲမှာကနျြးမာသကျရှညျခွငျးကို ဖျေါညှနျးလသေညျ။(ထို့ကွောငျ့ ခေါကျဆှဲကို ပွုတျရာ၌လညျးကောငျး၊ကွျောရာ၌လညျးကောငျး ဖွတျတောကျခွငျးမပွုကွပေ။)
8:40 PM C-Text , Chinese
သင် ရထားစီးပြီး ခရီးသွားရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ရထားစီးပြီး ခရီးရှည်တစ်ခုကို သင် သွားဖူးပါသလား။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ကျွန်တော် ရထားစီးပြီး ယူနန်ကို ခရီးသွားခဲ့တယ်။
ခရီးက ရှည်တော့ ကျွန်တော် အိပ်စင်မာ လက်မှတ် ဝယ်လိုက်တယ်၊ ညပိုင်းမှာ ခဏအိပ်လို့ရတာပေါ့။
ရထားပေါ်က ကုတင်က အရမ်းကျဉ်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရမ်းသန့်ရှင်းတယ်။
နေ့ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်က တခြားခရီးသည်တွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်း တရုတ်စကားပြော လေ့ကျင့်တာပေါ့။
သူတို့က အရမ်း ခင်ဖို့ကောင်းပြီး၊ ကျွန်တော့်ကို ဝေါဟာရအသစ်တွေ အများကြီးသင်ပေးတယ်။
သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ယူနန်ဒေသခံတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း အများကြီး ရှင်းပြသေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က ခဏလေးနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်။
အစကတော့ ကျွန်တော်က စားသောက်တွဲမှာ ထမင်းတစ်နပ် စားတယ်၊ ဒါပေမယ့် သိပ်စားမကောင်းပါဘူး၊ ဈေးလည်း မပေါပါဘူး။
နောက်တော့ ကျွန်တော်က အသင့်စား ခေါက်ဆွဲတွေပဲ ဝယ်စားတော့တယ်။
အလာပသလာပ မပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်က ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး အပြင်က ရှုခင်းတွေကို ကြည့်တယ်။
လမ်းတလျှောက်က ရှုခင်းတွေ အရမ်းလှတယ်၊ အထူးသဖြင့် ယူနန်ကို ရောက်ခါနီးမှာ တောတောင်သစ်ပင်တွေ အများကြီးပဲ။
1. 上个月〔shàng ge yuè〕 ပြီးခဲ့တဲ့လ
2. 坐〔zuò〕စီးသည်။ ထိုင်သည်
7. 硬卧票〔yìngwòpiào〕အိပ်စင်မာ လက်မှတ်
13. 白天〔báitiān〕 နေ့ဘက်
16. 练习〔liànxí〕 လေ့ကျင့်သည်
21. 生词〔shēngcí〕 ဝေါဟာရအသစ်
26. 成〔chéng〕... ဖြစ်သည်
28. 一顿饭〔yí dùn fàn〕ထမင်းတစ်နပ်
30. 便宜〔piányi〕 ဈေးပေါသော
32. 窗边〔chuāngbian〕 ပြတင်းပေါက်ဘေး
36. 山〔shān〕 တောင်
သငျ ရထားစီးပွီး ခရီးသှားရတာကို ကွိုကျနှဈသကျပါသလား။ ရထားစီးပွီး ခရီးရှညျတဈခုကို သငျ သှားဖူးပါသလား။
ပွီးခဲ့တဲ့လက ကြှနျတျော ရထားစီးပွီး ယူနနျကို ခရီးသှားခဲ့တယျ။
ခရီးက ရှညျတော့ ကြှနျတျော အိပျစငျမာ လကျမှတျ ဝယျလိုကျတယျ၊ ညပိုငျးမှာ ခဏအိပျလို့ရတာပေါ့။
ရထားပျေါက ကုတငျက အရမျးကဉျြးတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အရမျးသနျ့ရှငျးတယျ။
နပေို့ငျးမှာ ကြှနျတျောက တခွားခရီးသညျတှနေဲ့ စကားစမွညျပွောရငျး တရုတျစကားပွော လကေ့ငျြ့တာပေါ့။
သူတို့က အရမျး ခငျဖို့ကောငျးပွီး၊ ကြှနျတေျာ့ကို ဝေါဟာရအသဈတှေ အမြားကွီးသငျပေးတယျ။
သူတို့က ကြှနျတေျာ့ကို ယူနနျဒသေခံတှရေဲ့ ရိုးရာဓလေ့ ယဉျကြေးမှုတှအေကွောငျး အမြားကွီး ရှငျးပွသေးတယျ၊ ကြှနျတျောတို့က ခဏလေးနဲ့ မိတျဆှတှေဖွေဈသှားကွတယျ။
အစကတော့ ကြှနျတျောက စားသောကျတှဲမှာ ထမငျးတဈနပျ စားတယျ၊ ဒါပမေယျ့ သိပျစားမကောငျးပါဘူး၊ ဈေးလညျး မပေါပါဘူး။
နောကျတော့ ကြှနျတျောက အသငျ့စား ခေါကျဆှဲတှပေဲ ဝယျစားတော့တယျ။
အလာပသလာပ မပွောဖွဈတဲ့ အခြိနျတှမှော ကြှနျတျောက ပွတငျးပေါကျဘေးမှာ ထိုငျပွီး အပွငျက ရှုခငျးတှကေို ကွညျ့တယျ။
လမျးတလြှောကျက ရှုခငျးတှေ အရမျးလှတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ ယူနနျကို ရောကျခါနီးမှာ တောတောငျသဈပငျတှေ အမြားကွီးပဲ။
1. 上个月〔shàng ge yuè〕 ပွီးခဲ့တဲ့လ
2. 坐〔zuò〕စီးသညျ။ ထိုငျသညျ
7. 硬卧票〔yìngwòpiào〕အိပျစငျမာ လကျမှတျ
13. 白天〔báitiān〕 နဘေ့ကျ
16. 练习〔liànxí〕 လကေ့ငျြ့သညျ
21. 生词〔shēngcí〕 ဝေါဟာရအသဈ
26. 成〔chéng〕... ဖွဈသညျ
28. 一顿饭〔yí dùn fàn〕ထမငျးတဈနပျ
30. 便宜〔piányi〕 ဈေးပေါသော
32. 窗边〔chuāngbian〕 ပွတငျးပေါကျဘေး
36. 山〔shān〕 တောငျ
ဒါက သိပ်ကောင်းတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းပေါ့။
8:26 PM C-Text , Chinese
အခန်း ငှားမယ့်သူ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်မယ့်သူကို အခန်းအကြောင်း အကြမ်းမျဉ်း မိတ်ဆက်ပုံလေးကို လေ့လာကြပါစို့။
ဒီဟာက ၁၀၀ စတုရန်းမီတာရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းပါ၊
အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း၊ ဧည့်ခန်း တစ်ခန်း၊ မီးဖိုခန်း တစ်ခန်းနဲ့ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ နှစ်ခန်း ရှိပါတယ်။
ဝင်လိုက်တာနဲ့ ညာဘက်မှာ မီးဖိုခန်းဖြစ်ပြီး၊ ဆက်လျှောက်သွားရင် ဧည့်ခန်းကို ရောက်ပါမယ်၊
ပင်မအိပ်ခန်းက ဧည့်ခန်းရဲ့ တောင်ဘက်မှာ ရှိပြီး၊ နောက်ထပ် အိပ်ခန်းတစ်ခန်းက ဧည့်ခန်းရဲ့ မြောက်ဘက်မှာပါ၊
အိပ်ခန်းတွေရဲ့ ဘေးမှာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ ရှိပါတယ်။
ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဆိုဖာအသစ်တစ်ခုနဲ့ တီဗီတစ်လုံး ရှိပါတယ်၊
အိပ်ခန်းတိုင်းမှာ ကုတင်၊ အဝတ်ဘီရိုနဲ့ အဲယားကွန်း ရှိပါတယ်၊
မီးဖိုခန်းမှာတော့ ရေခဲသေတ္တာ အကြီးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။
ခင်ဗျားက အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။
7. 卫生间 [ wèishēngjiān ] ရေချိုးခန်းအိမ်သာ
10. 南边〔nánbiān〕 တောင်ဘက်
11. 北边〔běibiān〕 မြောက်ဘက်
12. 每〔měi〕... တိုင်း
13. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
14. 新沙发〔xīn shāfā〕ဆိုဖာအသစ်
20. 冰箱〔bīngxiāng〕 ရေခဲသေတ္တာ
21. 不用〔búyòng〕... ဖို့မလို
22. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
ဒါက သိပျကောငျးတဲ့ အခနျးတဈခနျးပေါ့။
အခနျး ငှားမယျ့သူ ဒါမှမဟုတျ ဝယျမယျ့သူကို အခနျးအကွောငျး အကွမျးမဉျြး မိတျဆကျပုံလေးကို လလေ့ာကွပါစို့။
ဒီဟာက ၁၀၀ စတုရနျးမီတာရှိတဲ့ အခနျးတဈခနျးပါ၊
အိပျခနျး နှဈခနျး၊ ဧညျ့ခနျး တဈခနျး၊ မီးဖိုခနျး တဈခနျးနဲ့ ရခြေိုးခနျးအိမျသာ နှဈခနျး ရှိပါတယျ။
ဝငျလိုကျတာနဲ့ ညာဘကျမှာ မီးဖိုခနျးဖွဈပွီး၊ ဆကျလြှောကျသှားရငျ ဧညျ့ခနျးကို ရောကျပါမယျ၊
ပငျမအိပျခနျးက ဧညျ့ခနျးရဲ့ တောငျဘကျမှာ ရှိပွီး၊ နောကျထပျ အိပျခနျးတဈခနျးက ဧညျ့ခနျးရဲ့ မွောကျဘကျမှာပါ၊
အိပျခနျးတှရေဲ့ ဘေးမှာ ရခြေိုးခနျးအိမျသာ ရှိပါတယျ။
ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ဆိုဖာအသဈတဈခုနဲ့ တီဗီတဈလုံး ရှိပါတယျ၊
အိပျခနျးတိုငျးမှာ ကုတငျ၊ အဝတျဘီရိုနဲ့ အဲယားကှနျး ရှိပါတယျ၊
မီးဖိုခနျးမှာတော့ ရခေဲသတ်ေတာ အကွီးတဈလုံး ရှိပါတယျ။
ခငျဗြားက အိမျသုံးပရိဘောဂတှကေို ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဝယျစရာမလိုပါဘူး။
7. 卫生间 [ wèishēngjiān ] ရခြေိုးခနျးအိမျသာ
10. 南边〔nánbiān〕 တောငျဘကျ
11. 北边〔běibiān〕 မွောကျဘကျ
12. 每〔měi〕... တိုငျး
13. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
14. 新沙发〔xīn shāfā〕ဆိုဖာအသဈ
20. 冰箱〔bīngxiāng〕 ရခေဲသတ်ေတာ
21. 不用〔búyòng〕... ဖို့မလို
22. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(226) 整
整 ဆိုတာက မြန်မာလို “ညီညာသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကို ရေးသားလေ့ကျင့်ကြပါစို့နော်။
မားကျော့မယ်တော် 天上圣母 媽祖
9:53 PM C-Knowledge , Chinese
ထေရဝါဒတွင် မဟာဇနက ဇာတ်တော်လာ
မယ်တော်မာယာ အလောင်း မဏိမေခလာ နတ်သမီး ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
ရေကြောင်း ခရီးသွားလာသူတို့သည် မဏိမေခလာ နတ်သမီးကို ပင်လယ်စောင့်နတ်အဖြစ် ယခုတိုင်
ပူဇော်ခြင်း အစောင့်အရှောက် တောင်းခံခြင်းရှိခဲ့သည်။
မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လဲ ပင်လယ်ကို အစိုးရသော ဘုရားမယ်တော် နတ်သမီး 天后聖母 ..天上聖母 အဖြစ် မဏိမေခလာ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး ပင်လယ်နတ်သမီး ပူဇော်ခြင်း အခမ်းအနားများတွင်
မြင့်မြတ်သော ကောင်းကင်မယ်တော် ပင်လယ်နတ် အဖြစ် ထည့်သွင်း ပူဇော်ခဲ့သည်။ နတ်သမီးတစ်ပါးပင် ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားလောင်းတော်ကို သမုဒ္ဒရာမှ ကယ်တင်တော်မူသည့် အတွက် နတ်မင်းများ အားလုံး
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ နေရာပေး အလေးအမြတ်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် 水菩薩 ဟူ၍ ကွမ်ရင်ဗောဓိသတ္တ၏ အသွင်တော်တမျိူး ကိုယ်ပွား တစ်မျိူး အဖြစ်လဲ ပင်လယ်ဘုရားကို ယုံကြည် ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။ မဟာယာန 水菩薩 ကို ပင်လယ်ဘုရား အဖြစ် ကွမ်ယင်ဗောဓိသတ္တ၏ ကိုယ်ပွားတော် နှင့် မဏိမေခလာနတ်သမီး ရောနှောကာ ပူဇော်ခဲ့သည်မှာ တရုတ်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်ရှိစဉ် ကတည်းက ဖြစ်သဖြင့် နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီနေပြီ ဖြစ်သည်။ မဟာယာနမှာကဲ့သို တာအိုဝါဒတွင် ပင်လယ်နတ်သမီး အဖြစ် 妈祖 ကို သတ်မှတ်ကိုးကွယ်သည်။
မားကျော့မယ်မယ်၏ သမိုင်းများ ဒေသအလိုက် ကွဲပြား ကြသော်လဲ ထင်ရှားသော ဇာတ်လမ်းမှာ Song ခေတ် Fujian ပြည်နယ် 莆田縣 ခရိုင် 湄州 ကျွန်းတွင် လင် (林) မျိူးနွယ် (Admin တို့ မျိူးနွယ်ပေါ့ ငိ ငိ ငိ) မိသားတစ်စု ရှိသည်။ 林愿 lin yuan မိသားစုသည် အရာရှိ အမတ်မင်း အဖြစ် အမျိူး ၇ ဆက် ထမ်းဆောင်၍ 林愿 လက်ထက်တွင် မင်းမှုထမ်းအဖြစ်မှ အနားယူကာ ပင်လယ်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသည်။ ထိုမိသားစုတွင် ကွမ်ယင်မယ်တော်နှင့် လောကသုံးပါး စစ်ဆေးရေးမှုး ခြေဗလာ နတ်မင်းကြီး၏ စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် သမီးရတနာ 林默娘 လင်မြောင်ညံကို မွေးဖွားသည်။ အကိုတစ်ယောက် အမတစ်ယောက် မွေးစားညီမ တစ်ယောက် ရှိသည်။ 林默娘 ကို ကိုယ်ဝန် ၁၄ လ လွယ်ရပြီး 960 ခုနှစ် တရုတ်လ ၃ လပိုင်း ၂၃ ရက်တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးပြီး ၄ လမပြည့်မှီ အထိ အငိုအရယ် မရှိသောကြောင့် 默娘 ဟု နာမည်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်တွင် ရေကူးအလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီး ကွမ်ယင်မယ်တော်နှင့် ခြေဗလာ နတ်မင်းတို့၏ စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် နတ်ဗေဒင် နတ်ဆေးပညာ တန်ခိုးစွမ်းအင်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ကွမ်ယင်ထံမှ လက်ကောက် ၂ ကွင်း ကျောက်စိမ်း အမိန့် တော် 如意 တစ်ခု ခြေဗလာနတ်မင်းထံမှ နတ်မှန်တစ်ခု ဖခင်၏ မျိူးဆက်မှ တန်ခိုးရှိသော နတ်ဓားတစ်လက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ တရားကျမ်းစာများကိုလဲ သင်ယူ တတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အိပ်ပျော်ချိန်တွင် ဝိဥာဉ်သည်
ဝတ်ရုံနီဖြင့် ကောင်းကင်သို့ပျံပြီး ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာအတွင်း ကယ်ဆယ်ခြင်း မကောင်းဆိုးဝါးနှင့် အခြားဘေးရန်များမှ စောင့်ရှောက်ခြင်း ပြုခဲ့သည်။
တရံရော အခါတွင် ဖခင်နှင့် အကိုတို့ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဒုက္ခတွေ့ရာ ဖခင်ကို ကယ်ဆယ်ပြီးချိန်တွင် အကိုကို ဆက်လက် ကယ်ဆယ်ရာ အမေလုပ်သူက ယက်ကန်းစင်တွင် အိပ်ပျော်နေသော သမီးကို
အတင်းနှိုးလိုက်သဖြင့် အကိုကို မကယ်နိုင်ပဲ အကို အသက်ဆုံးရသည်။ အသက် ၂၀ လောက်တွင် လူကိုယ်တိုင် ကောင်းကင်သို့ ပျံနိုင်ပြီး ကယ်တင်မှုများ
ဆောင်ရွက်သဖြင့် သက်ရှိထင်ရှား တန်ခိုးရှင် မယ်တော်အဖြစ် လူအများ၏ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ မိဘများက အိမ်ထောင်ပြုခိုင်းသဖြင့်
အိမ်ထောင်ပြုသော်လဲ လင်မယား အရာမနေပဲ
အပျိူစင် အဖြစ်သာ တရားကျင့်၍ နေခဲ့သည်။ 987 ခုနှစ် အသက် ၂၈ နှစ်တွင် အရှေ့ပင်လယ် နတ်နဂါးအပေါင်းတို့နှင့် စွမ်းအင်ပြိုင်ရာတွင်
အင်အားမမျှသဖြင့် လူအသက်ကို စွန့်ရပြီး ကွမ်ယင်မယ်တော် စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် နတ်ခန္ဓာကို ရရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ခန္ဓာကို မြေမမြုပ် မီးမသဂြိုလ်ပဲ
မာ့ကျော့ကျောင်းတွင် ပူဇော်ထားရာ ကျောက်ရုပ်ထု ဖြစ်သွား ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လူပြည်တွင် နတ်အဖြစ် ကိုးကွယ်ခံရပြီး လူတို့က မားကျော့မယ်တော် အတွက်
ဘုံကျောင်းကို ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ ဆောက်လုပ်ပြီး ကိုးကွယ်ကြသည်။ မိုးနတ်မင်းထံ ဆုတောင်းပေးကြရာ မိုးနတ်မင်းက နတ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပြီး 媽祖 ဘွဲ့တော်ဖြင့် ပင်လယ်နတ်သမီး အဖြစ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ တရုတ် ၉ လ ပိုင်း ၉ ရက်နေ့တွင် နတ်အဖြစ် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဆောင်ယူခြင်းခံရသည်။ လူပြည်တွင်သာ နတ်အဖြစ် နေထိုင်စောင့်ရှောက်ပြီး တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ မိုးနတ်မင်းထံ အစီရင်ခံခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ 千里眼 အမြင်တစ်သောင်းနတ်နှင့် 順風耳 လေအလျှင်အကြားနတ်တို့ အပါအဝင် တပည့် ၁၈ ယောက် ရရှိခဲ့သည်။ ပင်လယ်နတ်နဂါးများကို ခိုင်းစေ စီမံပိုင်ခွင့် ရရှိတော်မူသည်။ အလိုရှိသလို ကျယ်ဝန်းမြင့်မားနိုင်ပြီး မြေပြင်အထက် ပေ ၃၀၀၀ အမြင့်ရှိသော နတ်နန်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ကွမ်ယင်၏ မြေကမ္ဘာမှ ကိုယ်ပွား နတ်သမီး အဖြစ်
တောက်ဘာသာနှင့် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ယုံကြည်ကိုးစားခံခဲ့ရသည်။
Fujian, Zhejiang . Guangdong, all China. Taiwan, Vietnam, Ryukyu, Japan, စ၍ ယခုအခါ အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကိုးကွယ်သူ များပြားသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၆နိုင်ငံတွင် မားဇူ ဘုရားကျောင်းပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်၏ ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး မားဇူ ကျေင်းတော်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းမ ပေါ်ရှိ
ခိန့်ဟုတ်ကုန်း ဘုံကျောင်း ဖြစ်သည်။
媽祖.媽祖婆.天后.天妃.天上聖母.天后聖母.တို့မှာ မားဇူမယ်တော်၏ ဘွဲ့တော်များ ဖြစ်သည်။
1123တွင် ”南海女神” ဘွဲ့
1156တွင် “靈惠夫人” ဘွဲ့
1160တွင် “靈惠昭應夫人" ဘွဲ့
1167တွင် “靈惠昭應崇福夫人” ဘွဲ့
1184တွင် “靈惠昭應崇福善利夫人” ဘွဲ့
1192တွင် ”靈惠妃.” ဘွဲ့
1198တွင် “靈惠助順妃” ဘွဲ့
1208တွင် “靈惠助順顯衛妃” ဘွဲ့
1217တွင် “靈惠助順顯衛英烈妃” ဘွဲ့
1237တွင် “靈惠助順嘉應英烈妃” ဘွဲ့
1278တွင် “護國明著靈惠協正善慶顯濟 天妃” ဘွဲ့
1281တွင် “護國民著天妃” ဘွဲ့
1314တွင် “護國庇民廣濟明著天妃” ဘွဲ့
1329တွင် “護國庇民廣濟福惠明著天妃” ဘွဲ့
1354တွင် “輔國護對庇民廣濟福惠明著天妃” ဘွဲ့
1372တွင် “孝順純天孚濟感應聖妃” ဘွဲ့
1470တွင် “弘仁普濟護國庇民明著天妃” ဘွဲ့
1644 တွင် “天仙聖母青靈普化碧霞元君”
1680 တွင် “護國庇民妙靈照
1737တွင် “福佑群生”“誠感鹹孚” ဘွဲ့တော်များ ဂုဏ်ထူးများကို မားဇူမယ်မယ်၏ အစောင့်အရှောက် အကူအညီကို ရသော တိုင်းပြည်ဘုရင်များမှ ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
မားကြော့မယျတျော 天上圣母 媽祖
ထရေဝါဒတှငျ မဟာဇနက ဇာတျတျောလာ
မယျတျောမာယာ အလောငျး မဏိမခေလာ နတျသမီး ရှိသညျဟု ယုံကွညျပွီး ထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ
ရကွေောငျး ခရီးသှားလာသူတို့သညျ မဏိမခေလာ နတျသမီးကို ပငျလယျစောငျ့နတျအဖွဈ ယခုတိုငျ
ပူဇျောခွငျး အစောငျ့အရှောကျ တောငျးခံခွငျးရှိခဲ့သညျ။
မဟာယာန ဗုဒ်ဓဘာသာတှငျလဲ ပငျလယျကို အစိုးရသော ဘုရားမယျတျော နတျသမီး 天后聖母 ..天上聖母 အဖွဈ မဏိမခေလာ ရှိသညျဟု ယုံကွညျပွီး ပငျလယျနတျသမီး ပူဇျောခွငျး အခမျးအနားမြားတှငျ
မွငျ့မွတျသော ကောငျးကငျမယျတျော ပငျလယျနတျ အဖွဈ ထညျ့သှငျး ပူဇျောခဲ့သညျ။ နတျသမီးတဈပါးပငျ ဖွဈသျောလညျး ဘုရားလောငျးတျောကို သမုဒ်ဒရာမှ ကယျတငျတျောမူသညျ့ အတှကျ နတျမငျးမြား အားလုံး
နှဈပေါငျးထောငျခြီ နရောပေး အလေးအမွတျပွုခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ 水菩薩 ဟူ၍ ကှမျရငျဗောဓိသတ်တ၏ အသှငျတျောတမြိူး ကိုယျပှား တဈမြိူး အဖွဈလဲ ပငျလယျဘုရားကို ယုံကွညျ ပူဇျောခဲ့ကွသညျ။ မဟာယာန 水菩薩 ကို ပငျလယျဘုရား အဖွဈ ကှမျယငျဗောဓိသတ်တ၏ ကိုယျပှားတျော နှငျ့ မဏိမခေလာနတျသမီး ရောနှောကာ ပူဇျောခဲ့သညျမှာ တရုတျပွညျသို့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ရောကျရှိစဉျ ကတညျးက ဖွဈသဖွငျ့ နှဈပေါငျး ထောငျခြီနပွေီ ဖွဈသညျ။ မဟာယာနမှာကဲ့သို တာအိုဝါဒတှငျ ပငျလယျနတျသမီး အဖွဈ 妈祖 ကို သတျမှတျကိုးကှယျသညျ။
မားကြော့မယျမယျ၏ သမိုငျးမြား ဒသေအလိုကျ ကှဲပွား ကွသျောလဲ ထငျရှားသော ဇာတျလမျးမှာ Song ခတျေ Fujian ပွညျနယျ 莆田縣 ခရိုငျ 湄州 ကြှနျးတှငျ လငျ (林) မြိူးနှယျ (Admin တို့ မြိူးနှယျပေါ့ ငိ ငိ ငိ) မိသားတဈစု ရှိသညျ။ 林愿 lin yuan မိသားစုသညျ အရာရှိ အမတျမငျး အဖွဈ အမြိူး ၇ ဆကျ ထမျးဆောငျ၍ 林愿 လကျထကျတှငျ မငျးမှုထမျးအဖွဈမှ အနားယူကာ ပငျလယျလုပျငနျးဖွငျ့ အသကျမှေးသညျ။ ထိုမိသားစုတှငျ ကှမျယငျမယျတျောနှငျ့ လောကသုံးပါး စဈဆေးရေးမှုး ခွဗေလာ နတျမငျးကွီး၏ စောငျ့ရှောကျမှုဖွငျ့ သမီးရတနာ 林默娘 လငျမွောငျညံကို မှေးဖှားသညျ။ အကိုတဈယောကျ အမတဈယောကျ မှေးစားညီမ တဈယောကျ ရှိသညျ။ 林默娘 ကို ကိုယျဝနျ ၁၄ လ လှယျရပွီး 960 ခုနှဈ တရုတျလ ၃ လပိုငျး ၂၃ ရကျတှငျ မှေးဖှားသညျ။ မှေးပွီး ၄ လမပွညျ့မှီ အထိ အငိုအရယျ မရှိသောကွောငျ့ 默娘 ဟု နာမညျပေးခွငျး ဖွဈသညျ။ အသကျ ၁၅ နှဈတှငျ ရကေူးအလှနျကြှမျးကငျြပွီး ကှမျယငျမယျတျောနှငျ့ ခွဗေလာ နတျမငျးတို့၏ စောငျ့ရှောကျမှုဖွငျ့ နတျဗဒေငျ နတျဆေးပညာ တနျခိုးစှမျးအငျကို ရရှိခဲ့သညျ။ ကှမျယငျထံမှ လကျကောကျ ၂ ကှငျး ကြောကျစိမျး အမိနျ့ တျော 如意 တဈခု ခွဗေလာနတျမငျးထံမှ နတျမှနျတဈခု ဖခငျ၏ မြိူးဆကျမှ တနျခိုးရှိသော နတျဓားတဈလကျကို ရရှိခဲ့သညျ။ တရားကမျြးစာမြားကိုလဲ သငျယူ တတျမွောကျခဲ့သညျ။ အိပျပြျောခြိနျတှငျ ဝိဉာဉျသညျ
ဝတျရုံနီဖွငျ့ ကောငျးကငျသို့ပြံပွီး ပငျလယျ သမုဒ်ဒရာအတှငျး ကယျဆယျခွငျး မကောငျးဆိုးဝါးနှငျ့ အခွားဘေးရနျမြားမှ စောငျ့ရှောကျခွငျး ပွုခဲ့သညျ။
တရံရော အခါတှငျ ဖခငျနှငျ့ အကိုတို့ ပငျလယျပွငျတှငျ ဒုက်ခတှရေ့ာ ဖခငျကို ကယျဆယျပွီးခြိနျတှငျ အကိုကို ဆကျလကျ ကယျဆယျရာ အမလေုပျသူက ယကျကနျးစငျတှငျ အိပျပြျောနသေော သမီးကို
အတငျးနှိုးလိုကျသဖွငျ့ အကိုကို မကယျနိုငျပဲ အကို အသကျဆုံးရသညျ။ အသကျ ၂၀ လောကျတှငျ လူကိုယျတိုငျ ကောငျးကငျသို့ ပြံနိုငျပွီး ကယျတငျမှုမြား
ဆောငျရှကျသဖွငျ့ သကျရှိထငျရှား တနျခိုးရှငျ မယျတျောအဖွဈ လူအမြား၏ ကိုးကှယျခွငျးကို ရရှိခဲ့သညျ။ မိဘမြားက အိမျထောငျပွုခိုငျးသဖွငျ့
အိမျထောငျပွုသျောလဲ လငျမယား အရာမနပေဲ
အပြိူစငျ အဖွဈသာ တရားကငျြ့၍ နခေဲ့သညျ။ 987 ခုနှဈ အသကျ ၂၈ နှဈတှငျ အရှပေ့ငျလယျ နတျနဂါးအပေါငျးတို့နှငျ့ စှမျးအငျပွိုငျရာတှငျ
အငျအားမမြှသဖွငျ့ လူအသကျကို စှနျ့ရပွီး ကှမျယငျမယျတျော စောငျ့ရှောကျမှုဖွငျ့ နတျခန်ဓာကို ရရှိခဲ့သညျ။ ရုပျခန်ဓာကို မွမေမွုပျ မီးမသဂွိုလျပဲ
မာ့ကြော့ကြောငျးတှငျ ပူဇျောထားရာ ကြောကျရုပျထု ဖွဈသှား ခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။ လူပွညျတှငျ နတျအဖွဈ ကိုးကှယျခံရပွီး လူတို့က မားကြော့မယျတျော အတှကျ
ဘုံကြောငျးကို ကွီးကယျြခနျးနားစှာ ဆောကျလုပျပွီး ကိုးကှယျကွသညျ။ မိုးနတျမငျးထံ ဆုတောငျးပေးကွရာ မိုးနတျမငျးက နတျအဖွဈ အသိအမှတျပွု ပွီး 媽祖 ဘှဲ့တျောဖွငျ့ ပငျလယျနတျသမီး အဖွဈကို ရရှိခဲ့သညျ။ တရုတျ ၉ လ ပိုငျး ၉ ရကျနတှေ့ငျ နတျအဖွဈ ကောငျးကငျဘုံသို့ ဆောငျယူခွငျးခံရသညျ။ လူပွညျတှငျသာ နတျအဖွဈ နထေိုငျစောငျ့ရှောကျပွီး တဈနှဈတဈကွိမျသာ မိုးနတျမငျးထံ အစီရငျခံခှငျ့ ရရှိခဲ့သညျ။ 千里眼 အမွငျတဈသောငျးနတျနှငျ့ 順風耳 လအေလြှငျအကွားနတျတို့ အပါအဝငျ တပညျ့ ၁၈ ယောကျ ရရှိခဲ့သညျ။ ပငျလယျနတျနဂါးမြားကို ခိုငျးစေ စီမံပိုငျခှငျ့ ရရှိတျောမူသညျ။ အလိုရှိသလို ကယျြဝနျးမွငျ့မားနိုငျပွီး မွပွေငျအထကျ ပေ ၃၀၀၀ အမွငျ့ရှိသော နတျနနျးကို ရရှိခဲ့သညျ။ ကှမျယငျ၏ မွကေမ်ဘာမှ ကိုယျပှား နတျသမီး အဖွဈ
တောကျဘာသာနှငျ့ မဟာယာန ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြား ယုံကွညျကိုးစားခံခဲ့ရသညျ။
Fujian, Zhejiang . Guangdong, all China. Taiwan, Vietnam, Ryukyu, Japan, စ၍ ယခုအခါ အရှတေ့ောငျအာရှ နှငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျး ကိုးကှယျသူ မြားပွားသညျ။ နိုငျငံပေါငျး ၂၆နိုငျငံတှငျ မားဇူ ဘုရားကြောငျးပေါငျး ၁၅၀၀ ကြျောရှိသညျ။
မွနျမာပွညျ၏ ရှေးအကဆြုံးနှငျ့ အကွီးဆုံး မားဇူ ကငျြေးတျောမှာ ရနျကုနျမွို့ ကမျးနားလမျးမ ပျေါရှိ
ခိနျ့ဟုတျကုနျး ဘုံကြောငျး ဖွဈသညျ။
媽祖.媽祖婆.天后.天妃.天上聖母.天后聖母.တို့မှာ မားဇူမယျတျော၏ ဘှဲ့တျောမြား ဖွဈသညျ။
1123တှငျ ”南海女神” ဘှဲ့
1156တှငျ “靈惠夫人” ဘှဲ့
1160တှငျ “靈惠昭應夫人" ဘှဲ့
1167တှငျ “靈惠昭應崇福夫人” ဘှဲ့
1184တှငျ “靈惠昭應崇福善利夫人” ဘှဲ့
1192တှငျ ”靈惠妃.” ဘှဲ့
1198တှငျ “靈惠助順妃” ဘှဲ့
1208တှငျ “靈惠助順顯衛妃” ဘှဲ့
1217တှငျ “靈惠助順顯衛英烈妃” ဘှဲ့
1237တှငျ “靈惠助順嘉應英烈妃” ဘှဲ့
1278တှငျ “護國明著靈惠協正善慶顯濟 天妃” ဘှဲ့
1281တှငျ “護國民著天妃” ဘှဲ့
1314တှငျ “護國庇民廣濟明著天妃” ဘှဲ့
1329တှငျ “護國庇民廣濟福惠明著天妃” ဘှဲ့
1354တှငျ “輔國護對庇民廣濟福惠明著天妃” ဘှဲ့
1372တှငျ “孝順純天孚濟感應聖妃” ဘှဲ့
1470တှငျ “弘仁普濟護國庇民明著天妃” ဘှဲ့
1644 တှငျ “天仙聖母青靈普化碧霞元君”
1680 တှငျ “護國庇民妙靈照
1737တှငျ “福佑群生”“誠感鹹孚” ဘှဲ့တျောမြား ဂုဏျထူးမြားကို မားဇူမယျမယျ၏ အစောငျ့အရှောကျ အကူအညီကို ရသော တိုငျးပွညျဘုရငျမြားမှ ဆကျကပျခဲ့သညျ။
နန်ကျင်းမြို့အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း 南京大屠殺 Nan Jing Mas...
“ 孔雀明王 ခုံချွင့် မြိန်းဝမ် ” အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ...
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ၏ အခြေခံ အယူအဆများ။
တရုတ်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် သမိုင်းအကျဉ်း။
ကမ္ဘာ့အပ်စိုက်ကုနှင့် မြန်မာ့အပ်စိုက်ကု ဆေးပညာ။
တရုတ်သမိုင်းထဲမှ ဧကရာဇ်တို့၏ ဆန်းကြယ်သော ဖြစ်ရပ်မှ...
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(225) 吃
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(224) 张
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(223) 边
ခြူးအက 舞麒麟 ကို သင် မြင်ဖူးပါသလား။
သင်ရဲ့ တရုတ်အသံထွက် ပီသရဲ့လား။
ဒီနေ့ ရာသီဥတု ဘယ်လိုလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(222) 状
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(221) 形
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(220) 鼻
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(219) 各
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(218) 女
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(217) 男
သူရဲကောင်းသစ္စာရှင် ယွဲ့ဖေး 岳飛 (Yuè Fēi)။
“赵 (趙) ကျောက်“မျိူးနွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(22) 毛
စစ်သူကြီး ကျန်းဖေး (張飛) အကြောင်း။
ဂဏန်းနံပါတ်/ အရောင်တို့နှင့် ပတ်သတ်သော တရုတ် အယူအဆ...
တရုတ်နာမည်ကို ဘယ်လိုပြောပြီး မိတ်ဆက်မလဲ။
Z.Z.C.S တရုတ်စာသင်ကျောင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(216) 共
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(215) 齐
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(214) 右
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(213) 左
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(212) 主
ခိန့်ဟုတ် ဘုံကျောင်း တရုတ်စကား ပညာဒါနသင်တန်းများ။
သိရန်ကျယ် (Di Renjie)။
မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိုး တော်စိန်ခို။
မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်လူမျိူးများ။
တရုတ်ပြည်၏ တစ်ဦးတည်းသော ဧကရာဇ်ဘုရင်မကြီး။
杨/王/周/吴 “ရန်/ဝမ်/ကျိူး/ဝူ“ မျိူးနွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
李 “လီ” မျိူးနွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
張 (张) / 章 “ကျန်း”မျူိူးနွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
林 “လင်“ မျိူးနွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
တရုတ်လူမျိုးတို့၏ မျိုးနွယ်သတ်မှတ်ပုံ အနှစ်ချုပ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(211) 几
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(210) 正
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(209) 时
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(208) 母
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(207) 才
ကွန်ဖြူးရှပ်ကျောင်း ပညာသင်ဆု (Confucius Institute ...
ဒီလိုသာ တကယ်ပြောတတ်ရင် ဆရာကြီးပဲ။
အမေရိကန်သမ္မတ၏ မြေးမလေးရဲ့ တရုတ်နှစ်ကူး ဆုတောင်းသီခ...
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(21) 南
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(20) 文
ဒီနေ့ ခန်းဂျိစာလုံး(19) 酒